Ny fomba sy ny antony hananganana ny orinasa any Dubai 🥇 【# No1 ao Afovoany Atsinanana】
Nahoana no manangana ny orinasanao manokana ao Dubai?
Dubai 7 hotely kintana
Ahoana no hahazoanao asa any Dubai amin'ny 2020?
Aprily 20, 2019
navoakan'ny Dubai City Company at Aprily 19, 2019
Ahoana no hamoronana fiainana ho mpandrindra ara-barotra?
Ahoana ary ny antony manorina Business in Dubai 👳 Lehilahy miaraka amin'ny turban
Manakarena na ho tonga Marketing marketing Manager? Salama, John West no anarako. Vonona ny hampivoatra ny orinasanao aho. Hanampy anao hahazo mpanjifa avy amin'ny Internet sy Linkin aho !.
Iza moa i Jaona?
Izy dia mpiara-manorina ny Dubai City Company. Ny orinasam-pifandraisana iraisam-pirenena no niantso azy io hoe ny Growth Hacker lehiben'ny Ny Internet marketing any Dubai. Ny tranonkala fifaneraserana malaza indrindra dia nanambara fa iray amin'ireo tsena 10 ambony amin'ny media sosialy.
Maherin'ny iray tapitrisa no mijery tranonkala tambajotra John West Fantatra amin'ny fitarihana Facebook sy Pejy mifandray. Ity no orinasa ahy ary Ny tanjonay dia ny hampiroborobo ny Dubai!
Mpandraharaha maro avy any Dubai sy London no milaza fa namorona ny orinasa ambony 100 marketing ao amin'ny media sosialy ao Dubai.
John no mpanoratra ny bestsellers eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery sosialy ary nekena ho iray amin'ireo mpandraharaha mahay indrindra eo amin'ny 30.
Mampifaly ny mpanjifa, manampy anao hahazo asa manonofy any Dubai.
Miorina amin'ny SEO ve ny marketing Google ary Bing ary amin'ny ankapobeny miteny, mora vidy ny marketing?
Eny, azoko atao amin'ny 50% ny vidiny.
Inona no ilainao amin'ny Growth Hacker?
SEO sy ny fotoana?
Ny fananganana dia dingana maharitra sy mandany fotoana. izay no antony ilana famatsiam-bola betsaka. Amin'ny alàlan'ny fisafidianana serivisy ao amin'ny masoivoho ataoko dia ho azonao, ankoatra ny:
Fanadihadiana sy fanatsarana tanteraka ny votoaty,
Ny fampifanarahana ny lohatenin-dahatsoratra, ny lohatenin'ny meta sy ny famaritana,
Ny fanamafisana ny rafitra rohy amin'ny tranokala sy ny singa codecode,
Hetsika mifandraika amin'ny fidirana an-tsokosoko mankany amin'ny tranonkala.
Google Configurations (Google Analytics, sns.),
Hetsika mifandraika amin'ny rohy momba ny domains (rohy).
Internet Marketing dia dingana haingana sy mahomby. Izahay dia mampisoratra amin'ny dokam-barotra ary amin'izany dia mahazo mpanjifa vaovao isika. Mahazo dokam-barotra izy ireo, mitahiry ny angon-dry zareo, miverina any aminy isika, hividy ny vokatra.
Mitantana ny fanentanana dokambarotra ao amin'ny Internet ao amin'ny Social Media.
ROI (fiverenan'ny fampiasam-bola, fiverenan'ny fampiasam-bola).
Ny marketing amin'ny telefaona (fampilazana).
Fitomboan'ny famolavolana - Fomba fambolena mahomby ho an'ny orinasanao
Handamina ny fivoriana isika.
Manana orinasa kely ve ianao? - Antsoy fa afaka manampy anao aho! (Manolotra sanda kely)
Hamariko ny raharaham-barotrao + Mifalia mpanjifa vaovao
Manana orinasam-barotra ve ianao? - Hamboarinay izany! (Hifantoka amin'ny fandresena ny fifaninanana + Email Marketing + izahay)
Manana raharaham-barotra lehibe ve ianao? - Tsy andoavam-bola ianao, hamafa anao betsaka!
(Hamolavola izany iraisam-pirenena - Ankoatra ny hafa aho no niady tany Dubai, Londres. India, Indonezia - Manao asa sarotra 24h - 7 andro manerana ny tontolo manontolo izahay.
Tsidiho aho, midira ao amin'ny Google: Company Company Dubai
Ary ho hitanao avy eo ny fomba sy ny naoriko amin'ny LinkedIn, Facebook, Twitter ary Google.
Fantaro ny momba ny fanadihadiana momba ny varotra amin'ny Internet & data manampy amin'ny fanombanana sy ny fampandrosoana ny raharaham-barotra ataon'ny mpanjifa.
Ok, Mankanesa amin'ny zavatra fototra. Tonga teo amin'ny tranokalako ianao satria te hianatra kely amin'ny fomba ahoana ianao manomboka manomboka ao amin'ny faritr'i Gulf, indrindra fa ny United Arab Emirates.
Ny kompania dia antsoina hoe Dubai City Company ary efa nahazo vola tsara nandritra ny taona maro vola be any Emirates, Arabia Saodita ary Qatar.
Raha ny marina dia mahazo vola isika hanampiana ny olon-kafa. Mety ho toa hafahafa aminao izany, fa raha afaka manampy ny hafa ianao, tena hahomby amin'ny fiainana ianao.
Manomboka ny orinasanao momba ny varotra ianao dia tokony hahatsiaro zavatra vitsivitsy. Ny zavatra fototra fototra tokony hifantohanao dia ny fotoananao manokana, fa ny tsy fahampiana azy.
Mampalahelo fa tsy ny namanao no mitory fa tsy namanao. Isika mpivarotra indraindray dia mpiandry ondry mandritra ny ora 18. Efa niasa imbetsaka aho rehefa Marary aho na tsy nanana ny hery intsony. Ary ho azo antoka fa ianao amin'ny maha ho filohan'ny orinasa marketing, indrisy fa tsy maintsy hataonao ny mamanay izay nataoko Hatreto dia eo am-panamboarana ny orinasa Dubai City.
Mazava ho azy fa ny orinasa marketing manana ny lanjany. Aza manantena fambolena voanio afa-tsy ny taona voalohany amin'ny orinasanao. Afaka herintaona monja dia hahita ity vola ity azo ao am-paosinao ity vola ity.
Ho hitanao fa ho lasa malaza kokoa ao amin'ny Google ny orinasanao. Olona maro no hitady ny anaranao ary hitady ny asa ataonao amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny media sosialy.
Amin'ny taona fahatelo amin'ny tontolo virtoaly dia afaka manantena tombony azo ianao, hoy ianao, USD 10,000 isam-bolana. Toa vola be tokoa izany, fa ny asa ataonao ao amin'ity orinasa ity raha mizara azy mandritra ny adiny iray dia eo amin'ny 2 USD ny adiny iray. Izany dia mihoatra na ambany kokoa ny vidin'ny vidin'ny trano fiantsonana iray any Romania.
Mampalahelo fa tsy afaka miantehitra amin'ny miasa tsara mandritra ny adiny iray ianao amin'ny orinasanao marketing. kosa tokony manantena asa mafy ho an'ny karama ambany ianao. Hanombohana orinasa iray dia tena mila mpampiantrano varotra sy menaka kely iray amin'ny lohanao ianao.
Ho lasa tompon'ny boss dia adihevitra sarotra hitantanana!
Ny fametrahana ny orinasanao sy ny fananganana ny marinao dia asa sarotra. Ny tena miampy orinasa an-tserasera dia ny hahafahanao manao izay tianao amin'ny fotoana rehetra. Tsy mila miasa mandritra ny andro ahafahanao miasa amin'ny alina. Raha mitantana ny orinasanao amin'ny Google ianao dia mazava ho azy fa afaka manidina fitsangatsanganana any ivelany ianao.
Ny fitsidihana an'ity tontolo ity sy ny fandehanana manodidina dia ny fiheverana sy ny fiantraikany Mba hananganana orinasa iray amin'ny aterineto dia mila ny 5 sy 10 taona ianao.
Ny zava-misy dia toa tsy miasa isan-taona amin'ny solosaina ianao avy eo Vidio ny tenanao Bentley sy villa tsara tarehy, indrisy fa tena mampahory kokoa izany dia hiasa amin'ny androm-piainanao ianao ary ny fiantombohana dia ho mahagaga fa tsy matory ianao amin'ny alina, hividianana rantsan-droa roa ianao mba hitrandraka ny hodi-maso ambony hanakanana sy hanondranana azy ireo.
Ka marina fa asa mafy tokony hatao izany ary tsy ho ampy ary tsy ho ampy mihitsy ny orinasanao mba hahazoana ilay vola. Ianao mitady mitady. Ny teboka iray hafa dia fotoana iray ary mety hisian'ny fanatsarana. Mila miasa mafy ianao, ary mila mitantana ny tenanao ary mazava ho azy, manosika ny tenanao amin'ny fomba sarotra be.
Ohatra, dia orinasa i Dubai. Efa ela aho no nanangana io fikambanana io. Izaho dia nanomboka ity raharaham-barotra ity anarana hafa dia cV mandroso serivisy iraisam-pirenena. Avy eo manova ny anarana sy ny fomba ho fitohizan'ny asa ny orinasa. Io orinasa io dia voapotsitra tamin'ny taona 10 farany.
Ka tsy azonao an-tsaina afa-tsy ny misedra azy mifohaza sy mihazakazaka isan'andro. Betsaka ny valiny miaraka amin'ny fianakavianao sy ny tranon'ny asa efa voatery harahinao ary mila manao ny tenanao ianao amin'ny fanombohana.
Tadidiko ny tenako taona lasa izay dia nameno ny solosaina finday aho ary nanomboka tamin'izay dia nandroso tamin'ny lalana tsara. Mitady vola be lavitra noho izay tsy azoko an-tsaina akory aho. Mazava ho azy fa nametraka blaogy haino aman-jery maro an'arivony sy advertsika n 'Linkin aho. Mazava ho azy, mahatonga ahy hanana orinasa iray tsy miova ao amin'ny tsena Dubai ianao.
Amin'ny lafiny iray hafa sy ireo varotra toy ny asa aman-draharaha mpitrandraka sy ny orinasa marketing, dia hanampy manorina ny fotoananao sy ny hoavinao ianao. Te ho afaka mahazo zavatra ianao, Raikitra, ny fotoana izay tianao hanaovana ilay fotoana. Misy olona handamina anao.
Ka izany no mahatsara sy mahomby amin'ny fananganana orinasa an-tserasera. Mila mahatadidy an'ireo Emirà Arabo ve ianao fa tsy tsena mora atao rehefa manao asa ?. Noho izany alohan'ny hanombohanao ny orinasanao manokana ianao mety manao doobie zato isan-jato azo antoka hoe dadanao fantatrao ny niche anao ary manana traikefa ampy anananao ianao mitsangàna ary mihazakazaka manomboka ny asanao.
Amin'ny ankapobeny, ny fomba haingana indrindra hanombohana ny orinasanao manokana dia manomboka amin'ny media sosialy. Azonao atao ny mampiroborobo ny vokatrao ankehitriny mpanjifa mpanjifa lehibe kokoa na amin'ny namanao. Ho vokatra iray izy ireo ary mety ho mpanjifa hafa mety ho izy ireo raiso ny orinasanao ary mangataka fanazavana fanampiny.
Ity no lalana haingana sy mahira-tsaina indrindra amin'ny fananganana ny ho avy sy mahafinaritra ny fiainanao. Arakaraka ny anarahanao ny orinasako amin'ny Internet dia ho hitanao fa ny Facebook sy ny LinkedIn dia ny ampahany lehibe aminay. Ary avy any tena mahazo mpanjifa tena tsara izahay isika dia afaka manofana sy manampy azy ireo hahazo asa ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Ohatrinona ny azonao atao ao anaty aterineto?
raharaham-barotra an-tserasera am-pahatsorana fa tsy io no asa mahasoa indrindra. Fa ahoana ny fomba hanamboarana manodidina ny $ 5,000 isam-bolana raha handeha manodidina ny valo ka hatramin'ny 10 ora iray isan'andro. Ka raha maka izany isika dia hampitaha io karazana vola io amin'ny asa mahazatra. Izy io dia iray amin'ireo fomba tsara an'i Imani ary mitarika fiainana tsara.
Orinasa an-tserasera toy ny marketing marketing na asa fanarenana tsy fomba hanamboarana dolara an-tapitrisany raha tsy miakatra anio ianao hevitra tsara hanampy ny olona hamaha ny olany.
Ity orinasa ity dia nahavita nitentina an-jatony tapitrisa dolara isan-kerinandro. Avy eo dia nifindra amin'ny an'arivony dolara isam-bolana. Ary avy eo lasa nanjary tena mahasoa orinasa. Hatreto sy izao dia miely be ity raharaha ity tsara sy tsy dia be loatra ny asa atao isan'andro. Ny tsy maintsy ataonao dia ny fanompoana ny mpanjifana misy fahamendrehana sy manampy azy ireo hahatratra fahombiazana manokana sy asa.
Mampidi-doza ny manao Run own marketing Company?
Ny ankamaroan'ny andronao dia tsy afa-po ny vadinao. Ho fanombohana ny fiantombohana, hitsahatra tsy hisakafo maraina nanoratra momba ny 15: 00 ho mandro ianao dia ho takatra fa tsy nandao ilay alika akory ianao nanomboka omaly. Avy eo ny sakafo dia ao amin'ny 18: 00 dia ho board io fa ho an'ny alikanao tsy avela hijanona amin'ny dingana manaraka fa tsy matory amin'ny alina, ny mpifanolobodirindrina dia hitsahatra hilaza aminareo maraina izao ary ny ankizy hihoby eo aminao eny an-dalambe fa ianao no Zombie.
Ary azo antoka fa tsy misy crème hanampy ny herin'ny vehivavy rehetra tsy hanampy ary izay lazainay. Saika tsy manam-bady akory ianao. Rehefa manontany tena ny vadinao? Inona no maimbo ao an-trano taorian'ny hafatra 15 ho an'ny mpanjifa.
Ary mbola mila mamoaka mailaka mankany amin'ny làlan-kalehanao ianao rehefa farany dia manopy maso ny masonao hahita azy any am-piandohan'ny lalantsara satria indrisy fa manana olana amin'ny maso avy amin'ny solosaina koa ianao.
Etsy ankilany, manangona eritreritra ianao hividy manomboka amin'ny tontolo virtoaly manomboka manomboka miadana tsikelikely ny tenanao ianao hoe inona ny fanontaniana napetraky ny vadinao tamin'ny nanombohan'ny lohanareo mba hanamarina izay mety ho valiny voalohany.
Mety ho fako amin'ny herinandro ny valiny faharoa socks ao ambadiky ny fandriana ary raha ny marina dia eny rehetra eny ny valiny 3 Ianao no alika.
Ny dingana tsirairay avy dia ho ratsy kokoa ihany, saingy ho avy ny fotoana ary tsy hiandry ela ianao raha hitanao fa manomboka mihetsika tsikelikely ny toe-bolan'ny kaontinao, mahagaga fa tsy avy amin'ny vola nalefan'ny reninao izany. manomboka ny mahita ny dikan'ny asanao ianao ary jereo fa mipetraka amin'ny solosaina izy nefa mbola mihalehibe. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy dia tsy hitanao ny asanao dia amboariny amiko fa ny vokatrao sy ny tranonkalanao dia manomboka mahazo toerana tsara kokoa amin'ny laharana Google.
Ary raha azo antoka mitady olona anao ny olona dia avy eo, olona tadiavinao izay tolo-kevitrareo fa misy olona betsaka kokoa tahaka anao. Ary toa anao ihany izy ireo dia tsy midika hoe Zombie. Noho izany, ireo olona mitady vokatra izay azonao omena azy ireo na serivisy ary dia mahazo vola amin'ny Internet amin'ny orinasanao manokana ianao.
Ary izao no fotoana hifohazanao amin'ity solosaina ity. Mifoha amin'ny solosaina ianao, atsangano ireo jamba ao anaty efitrano tsapanao tahaka ny tara-masoandro tampoka ny tarehinao ary tsapanao fa mendrika izany isaky ny min.
Tena manana tranokala tena tsara ianao, manana orinasa tsara toerana, ary ny lehibe indrindra ianao dia tompon'andraikitra amin'izay rehetra nataonao izay noforoninao ary ny vadinao ary tsy misy afaka manaisotra azy, ho very ny pejy, ny fahalalanao ny fahaiza-manao efa manana ianao dia hamela anao hanangana orinasa lehibe iray hafa.
Nahoana no mahafinaritra be ho an'ny asa SEO ny Dubai?
Dubai no toerana lehibe indrindra namboarin'olombelona ho an'ny olombelona hafa. Izany no antony anampian'ny orinasa anay hoe inona avy ireo mpiasa hahavita asa vaovao ao anatin'ny United Arab Emirates.
Ny ekipanay hatreto dia nanampy olona an'arivony manerantany. ny ankamaroany Miara-miasa amin'ireo vahoaka Indiana isika ary olona miteny ny teny Arabo sy ny fiteny Farsi. Ka raha miaina any Eropa ianao na any Emirates Arabo dia afaka mba hanampiana anao sy hanomezana ny asanao any amin'ny faritra Golfa.
Ny tanàna Dubai dia lehibe toerana satria mety hahazo asa mahagaga ianao ary mahazo haingana be. Teboka tsara hafa no toerana tsara indrindra for expats izany ve ity toerana ity dia tena tsara amin'ny fahazoana lalao haingana kokoa noho ny toeran-kafa ao amin'ny Golfa.
Izany dia orinasa an'arivony tena mahazo asa ianao ary afaka mifandray amina olon-kafa. Ohatra, azonao atao ny miditra amin'ny mombamomba ny LinkedIn sy ny pejiko orinasa Facebook. Amin'ny fanarahana ny mombamomba ny orinasa misy anao dia afaka tena ahazoana tolotra asa mahaliana ary mifandray amin'ny match ny olona maro hafa mitady asa tahaka ny ataonao ihany koa.
Ity orinasa ity dia marika tsara any Dubai ihany koa ao amin'ny tranonkalany dia afaka mifandray tsara ianao ary ianao koa dia hahita boo 2 hahita izay tena ataon'izy ireo amin'ny resaka orinasa. Niara-niasa tamin'ity orinasa Otomatis ity tany Endrika hafa any Dubai hanome anao làlana mankany amin'ny laminasa ho an'ny karazam-pandrosoana ho an'ny varotra zokiolona na departemanta injeniera ianao.
Orinasa miorina ao amin'ny tanàna any Dubai. Ity marika ity dia orinasa iraisam-pirenena fotsy lehibe. Ankoatr'izay, ity fikambanana ity dia manakarama olona eran'izao tontolo izao. Ka na aiza na aiza fa avy marina ianao dia mbola afaka mahazo asa miaraka aminy. Araka ny fantatsika rehetra dia ny 80% amin'ny mpiasa no avy any India sy Pakistan. Izany no antony na inona na inona, raha tena mikasa ny hiainga any Dubai ianao. Mbola manana fotoana ianao ary azafady ampiharina ao amin'ny tranonkalany. Amin'izay mba hanome anao ny zavakanto vaovao Haygood any Dubai.
Ity marika ity dia tena marika tena manokana ary ny ankamaroan'ny mpiasa dia tsy afaka mahazo ilay asa miaraka amin'izy ireo. Na izany aza, raha manana traikefa tsara ianao dia afaka manana safidy ianao dia ho afaka mba hahazo asa miaraka amin'izay. Ireo orinasa ireo dia manakarama tale sy eken'ny Tale Jeneralin'ny talenta.
Ka raha manana traikefa ianao dia hanana fotoana hiaraha-miasa amin'ireo orinasa toa an'io. Misy rohy iray omena eo ambony sy azafady miresaka aminy sy avy eo dia hitondra anao amin'ny faritry ny asa izy ireo. Manantena aho fa hahazo asa mitambatra Etazonia miaraka amin'ity orinasa ity ianao.
Fikambanana malaza fanta-daza. Ny fitiavana amin'ny Internet no jerena fotsiny amin'ity orinasa ity. Noho izany dia hahazo ny tsena miaraka amin'ireo marika ambony toa an'io ianao. Amin'ny ankapobeny, ny orinasam-pitaterana dia manome karama sarobidy foana ho an'ny mpiasany. ary afaka manantena foana amin'ny lafiny hafa fiofanana tsara ianao ary mametraka tsara ny fampiofanana azy.
Noho izany ny fahitana ny fitaovana vaovao dia teboka tsara ho an'ny mpikaroka momba ny asa sy ny olona izay mitady ny rafitra tambajotra. Amin'ny ankapobeny, raha ianao mitady hifandray amin'ny olona ao Dubai. Ampiasao ny fitaovantsika ary asao hisintona poop amin'ny lisitry ny mailaka anao. Namorona rafitra mora fotsiny izahay. Ka izay rehetra tsy maintsy ataonao dia ao amin'ny Gmail na Hotmail ihany. Avy eo manondrana mailaka ao amin'ny lisitry ny mailaka anao.
Aorian'izay dia hitalaho ny fifandraisana faran'izay kely indrindra amin'ny orinasanay izahay manasa ireo fitaovana rehetra. Mandefa fanasana avy hatrany ianao hahafantatra anao ny biraon'ny orinasa City. Noho izany olona hafa hapetrakao amin'ny sonia any Dubai na tena miaina amin'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Misy ny lehibe azo. Mety ho ny olona sasany mahaliana anao hiaraka amin'ny orinasan-tanànan'i Dubai. Ary izay rehetra tsy maintsy ataonao dia ny hanomezany azy ireo fotsiny amin'ny fomba Smart amin'ny fampiasana ny serivisy orinasa. Raha maka ohatra 4 isika dia olona mahazatra manana 300 ka hatramin'ny 500. Asain'ilay olona ho any amin'ny tranokalanay ilay olona. dia Tena mendrika ny hiditra ao amin'ny tranokalanay ny olona iray.
Na izany aza, ny fomba manan-tsaina indrindra hahazoana sy manasa ny namanao any Dubai. Mankany amin'ny mombamomba an'i LinkedIn izy io. Ary avy eo dia fomba mora hanondranana ny mpikambana BTS sakaizanao sy avy eo mandefa fanasana fotsiny ho azy ireo ihany koa. Noho izany dia tsy ho avy amin'ny haino aman-jery sosialy fotsiny ianao. Mety hanampy anao hanorina ny marika anao izany ary hiseho amin'ny haino aman-jery sosialy ihany koa.
Ny orinasa afovoan'i Dubai dia tanjona manampy ny olona hikaroka faritra misy ny zavanisy. Amin'ny ankapobeny dia miteny raha mitady hifandray amin'ny olona liana ianao Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita ary Koety. Ny orinasanay dia 4 tonga lafatra ho an'ny zavatra ilainao.
Vestidos Cold Shoulder sy ny bokotra Bow Business Party Office Bodycon Office Vehivavy akanjo B483
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 20 mpanjifa naoty
Ny akanjo miloko marevaka be kalitao tsara tarehy mandrakizay azo itokisana mba hiasa vestidos Business Party Office Office Body Body Dress B463
5XL 6XL Fararano Akan'ny marika akanjo 2019 ririnina vehivavy mafana habe akanjo vita amin'ny birao birao birao birao 4XL Big size Bodycon Party akanjo
Ny Fiainana velona dia fanalahidy hahomby. Noho izany dia manasa anao bebe kokoa amin'ny orinasa izahay ary ampio izy ireo hahita asa mba hanao fampitam-baovao sosialy sasany ao Dubai. Aza adino mba hizara sy tianao ny lahatsoratra. Ka noho izany dia ho hitan'ny namanao daholo izay ataonao amin'ny Internet sy ny fahasarotanao miezaka manatratra asa any Dubai.
Karohy amin'ny Marketing
SEO ary Work amin'ny Marketing amin'ny orinasanao manokana ?. Nanomboka tamin'ny sehatry ny marketing ara-barotra aho dia tena tanora. Tamin'ny taona 21 sy tapany taona dia nanomboka ny orinasan-tserasera voalohany aho.
Fantatrao ve hoe inona no orinasako voalohany?
Led Multimedia io. Nanangana orinasa aho satria tsy afaka findra-karama karama amin'izao vanim-potoana izao. Nom, nanandrana aho mahita asa karama be any Eropa sy Afovoany Atsinanana !.
Araka ny azonao an-tsaina, tsy nahomby izany, nahazo ahy ny zava-misy ary farany dia nampiasa vola tamin'ny LED aho.
Nilainay ny jiro LED mba hilalao sarimihetsika amin'ny sehatra lehibe. Ary ny fampiroboroboana orinasa lehibe amin'ny Marketing ... dia mitohy ny lisitra.
Avy eo dia very tamin'ny 250,000 USD aho
Fa raha tokony hanomboka ny zava-drehetra hatrany am-piandohana aho. inona no heverinao fa hataoko?
Alohan'ny hahatongavako an'izany, andao aloha hiresaka aloha ny zavatra hitako tara farany teo amin'ny varotra aho asa any Dubai…
Inona no Mianatra tara loatra amin'ny asako aho? Ny toerana misy ny tranonkala antsoina hoe SEO. Ka manaiky aho fa tena tsara aho amin'ny zavatra iray ary zavatra iray ihany. Amin'ny Internet Marketing
Amin'izao fotoana izao aho mitantana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ho an'ny mpanjifako.
Izany rehetra izany dia miankina amin'ny orinasa izay misy ilay tranonkala, azoko atao ny manintona ny fifamoivoizana eo aminy ary mampihetsi-po azy. Ary indrindra indrindra, afaka manao izany aho raha tsy misy dokam-barotra.
Saingy satria afaka manao zavatra iray aho. tsy midika izany fa afaka mamorona orinasa mahomby aho. Fantatro ny momba izany ao amin'ny 2015. Mbola mila olona mahavariana manodidina ahy aho.
Eny, taorian'ny faharavana voalohany amin'ny orinasako marketing voalohany. Nanapa-kevitra ny ho lasa mpitantana aho, I nankany Etazonia.
Nahazo ny hafatry ny mpiandraikitra iray tany Irlandy aho, avy eo nifindra tany London. Tao amin'ny iray amin'ireo orinasam-bola dia nahazo fiofanana amin'ny marketing aho.
Tonga tany aminay ny olona namorona Disneyland. Nianatra aho avy eo ny fomba hanamboarana ny marika orinasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ohatra, fony izaho nanomboka miara-miasa amin'ny Dubai Marketers, ny miniako nanomboka nivoatra ny asa.
Avy eo aho dia nahazo ny 350,000 USD
Taorian'io filana io dia nanangana orinasa an-tserasera aho ao Dubai. Na izany aza tsy dia nahay ny fomba hampiroboroboana azy ?. John West dia nanapa-kevitra ny hahita olona liana amin'ny seriviko.
Nanangana ny Company Dubai tao amin'ny Linkedin aho
Nahomby aho ary nanomboka tamin'ny Online Marketing. Naharitra volana eo ho eo izany nandritra ny volana 6. Ary manohitra ny Mazava ho azy ny matrix. My company nanomboka nahazo vola manokana.
Avy eo dia nahazo ny Million Dollar voalohany aho
Nahazo vola be aho afaka herintaona mahery. Inona no mety handanianao vola toy izany? trano fisakafoanana lafo, fiara fanatanjahantena, fitsangatsanganana vahiny, Quads sy toerana tsy miankina ao amin'ny SPA ho an'ny fianakaviana.
Izaho dia lasa mpitantana ny ampahany amin'ny orinasa ara-bola, matetika tsy misy izay tiako atao.
Ry mpanankarena raha tsy manam-potoana izy ireo dia hahita olona izay hanao izany.
Mahita ianao, maro ny mpivarotra, ny mpitantana orinasa dia tsy manana fanabeazana ary tsy tompon'andraikitra amin'ny ankapobeny izany.
Ny ankamaroan'izy ireo dia tena tsara tokoa amin'ny fananganana ekipa matanjaka sy fananganana ireo olona marina.
Ary ny tsara indrindra indrindra, azon'izy ireo atao amin'ny teti-bola voafetra.
Izany no fahaiza-manaony tsara indrindra!
Niara-niasa tamin'ny mpitantana ambony tany London sy Dubai aho
Miara-miasa amin'ireo mpitantana tsara indrindra London, Dubai, New York. Tsapako avy hatrany fa na dia hentitra aza ianao dia tsy manangana orinasa lehibe raha tsy manana ekipa mahay ianao.
Mazava ho azy fa afaka mitentina an-tapitrisany maro ianao, izy io dia tsy hira goavambe amin'ny varotra. Sarotra ihany anefa ny mahazo, hoy, ny dolara 500,000, na ny 1,500,000 dirhams isan-taona amin'ny fidiram-bola nefa tsy dia ekipa mpivarotra sy marketing.
Mazava ho azy fa hanampy anao ny olona ary haingana hampivoatra ny orinasanao. Lazao mivantana, miaraka amin'ny atidoha kokoa, Mihevitra ianao fa misafidy olona tsara ianao, mamaha ny olana haingana kokoa ary mahita ny vola miditra amin'ny vola miditra.
Inona àry no hataoko raha tsy maintsy manomboka indray aho?
Eny, ny lesona momba ny fiainana etsy ambony dia iray amin'ireo lesona sarotra indrindra nianarako. Ary fantatro fa tara tamin'ny asako.
Tokony hanao izany ve aho amin'ny taona 18?
Mazava ho azy fa rehefa manomboka ho mpandraharaha loatra ianao na antitra dia manao fahadisoana (indraindray lehibe loatra) fa mety tsy ho nataonao raha nanomboka ny dianao mpandraharaha rehefa afaka kelikely.
Inona àry no hataoko?
Eny, handany ny 9 voalohany aho taonan'ny diako mpandraharaha nandritry ny taona maro nitombo tao amin'ny orinasa marketing.
Nandritra ny telo taona voalohany, nandaniako ny fotoako tamin'ny fampidirana laharana mpandraharaha sy teknôlôjia aho. Ary tena tsara fa tsy manana famatsiam-bola be loatra aho. Satria sarotra ny tetikasa toa izany ary tsy manomboka toy ny sambo rock.
Ny antony tsy hisafidianako orinasa madinika haingana dia haingana fa ny ampahany sarotra dia ny fampandehanana ny orinasa.
Satria amin'ny dingana manaraka amin'ny fampandrosoana. Miasa ao anaty orinasa iray izay misy tsindry mahavariana noho ireo tetikasa vanimpotoana na tsy faly.
Tsy afaka tianao na mahafehy zavatra iray ianao, izay azo fehezina amin'ny orinasa antonony ihany. Ny endrika manomboka dia mampianatra ianao mamorona sy ny ady amin'ny fandresena.
Manomboka ny orinasa iray hianarananao ny fiainan'ny orinasa.
Taorian'ny taona voalohany nandaniany ny 3 tao amin'ny orinasa kely iray dia nandany roa taona manaraka aho niasa tao amin'ny orinasa lehibe iray any Etazonia na London, izay mahazo vola farafaharatsiny DH 10 tapitrisa ary mitombo toy ny fety ao amin'ny governemanta taorian'ny fifidianana.
Izy io dia hanampy anao hahatakatra hoe manao ahoana ny orinasa mivelatra haingana. Koa avelao ianao ho mpilalao voalohany. Fa. azo antoka dia hambarany aminao fa tsy misy asa ok, tena maloto sy sarotra izany.
Avy eo dia misy ny foza ho an'ny fahaketrahana
Maro ny zavatra tsy mahavita azy, ny zokinao dia lasa mpitantana ary dia rava ianao satria mihombo haingana amin'ny faniriana. Ny fahaiza-manao dia mitaky fotoana sy tolona.
Mazava ho azy, mbola afaka mianatra zavatra tahaka ny toekarena ianao, na afaka miara-miasa amin'ny olona toa ny varotra sy ny fitantanana. Nefa eto ianao dia tsy maintsy manomboka manao asa be.
Taorian'ny taona 2 manaraka, tokony handany ny 2 taona miasa any amin'ny orinasa antonony ianao. Na mihoatra aza ny orinasa iray izay mivoaka zato tapitrisa tapitrisa isan-taona, farafahakeliny, fa latsaky ny iray tapitrisa Dirham.
Ny orinasam-pifandraisana no tsy mitovy amin'ny fanombohana!
Ireo tetikasa miatrika orinasa salantsalany tsy mitovy amin'ny orinasa madinika sy ny vondron'orinasa lehibe. Saingy ao anatin'ny fifangaroana ao anaty iray amin'ireto orinasa ireto, mandritra ny taona vitsivitsy ianao no mianatra ny zava-drehetra amin'ny fiatrehana anao politika, ny fomba hampivoarana ny orinasa miadana, eny fa na dia mieritreritra sary lehibe aza.
Ka ahoana ny orinasa lehibe kokoa, ohatra, i Dubai sy London dia mitady tsena lehibe, satria fantatr'izy ireo fa mora kokoa ny manana 10% an'ny orinasa mendrika ny maro dirhams an-tapitrisany maro ohatra ao UAE noho ny manana 50% ny indostria mendrika ny zlotys an-tapitrisany maro any Eropa.
Taona farany amin'ny ny asako matihanina, Dia handany tao amin'ny orinasa lehibe iray aho amin'ny maha-Mpitondra andraikitra na filoha lefitra ahy. Rehefa miteny aho hoe "orinasa lehibe" dia miresaka orinasa iray izay mihoatra ny 10 miliara Dirhams, Orlen, ary mety ho tsara indrindra na dia eo amin'ny tsenam-bahoaka sy ny tsenam-bola.
Inona no hataoko aorian'ny taona 10 ho mpiasa?
Ny tanjon'ny asa ho an'ny orinasa hafa na ny olona mahira-tsaina dia ny mahazo ireo mpampianatra mahay sy mianara ny tontolon'ny varotra marina.
Tsy mahomby tahaka ny fahitan'ny ankamaroan'ny olona ny fahombiazana. Mora ny fahombiazana ary toa afaka mieritreritra ireo mpisintaka "mahomby" be dia be ao amin'ny Instagram ianao. Matetika izy ireo dia hita eo amin'ny fahitalavitra ihany koa miezaha hivarotra ny tenany amin'ny media sosialy na amin'ny fahitalavitra.
Ny hevitra momba ny asa amin'ny marketing
Entram-barotra, orinasam-barotra sy toerany ireo tranonkala any UAE dia mijery tsara ary mahatalanjona. Tsy hanakalo izany aho amin'ny nofy hafa.
saingy alohan'ny handaozanao dia tonga mpandraharaha, Mianara amina orinasa isan-karazany.
Being a PDG tsy fomba mora, ary ny zavatra farany tianao atao dia ny tsy fahombiazana noho ny hakamoana satria ny lazanao dia ao anatin'ny fanananao rehetra.
Miasa amin'ny toe-javatra sarotra mandritra ny taona vitsivitsy any amin'ny orinasan'ny olona hafa, ianao hampitombo ny voka-dresakao na hahomby amin'ny orinasanao.
Ary rehefa vonona ny handeha irery ianao, andao antenaina!.
Safidy hendry io raha manomboka amin'ireo mpiara-manorina mahafinaritra tokoa rehefa manorina orinasa satria dia mila izany be loatra ny fotoana sy ny renivohitra hanaovana izany rehetra izany.
Inona no hataonao raha manomboka indray ianao?
Asa amidy amin'ny Marketing sy SEO
Miantso androany ary mandamina fepetra maimaim-poana Hiresaka momba ny zavatra niainanao izahay!
Andao hiresaka momba ny raharaham-barotra!
Ny toerana misy ny pejin'ny Dubai City amin'ny tsena eo an-toerana. Ilay malalanay Ny mponina ao Dubai dia monina ao anaty tanàna manokana. Eny, mizara roa amin'ny faritra roa mponina. Ny faritra voalohany amin'ny mponina dia vondrona iray izay miasa amin'ny serivisy fanamiana any Dubai, ohatra ao amin'ny andian-tafika mpiambina ny afo ary polisy.
Ity vondrona sosialy ity dia miroborobo ara-dalàna ary mila mandinika ny vokatra sy ny fomba hanoratanao ny tranokalanao.
Izahay dia sampan-draharaham-barotra manokan-tena izay hanampy anao hahatakatra ny fomba fampiasa amin'ny Internet ao amin'ny Google. Tsy hanenina ianao raha omentsika fahafaham-po ary antsoy ny nomeraon-telefaona etsy ambany.
Website Marketing - Hanampy anao hampiroborobo ny Po ahositioning sy SEO in Dubai City
Ny orinasa miasa amin'ny matihanina dia miresaka momba ny toeran'ny tranokala manerana ny Faritra. Tena tanàna ho anay i Dubai sy Abu Dhabi satria efa nandany taona maro teto izahay, fantatsika izay zava-maniry eny amin'ny bozaka.
Amin'izao fotoana izao, betsaka ny orinasa vaovao mitombo ao amin'ny tsenan'ny UAE, ohatra, ny toeram-pivarotana, fomban-trano sy fivarotana akanjo.
Ary raha te-hamely ny takelaka voalohany ianao any Qatar sy Koety. Tsy ho goavana loatra ny fifaninanana ary ny habetsaky ny orinasanao dia hatao lehibe kokoa raha vao omenay fotoana ahafahana mametraka ny tranokalanao ao amin'ny Top 10 Google.
Tena tsena tena tsara i Dubai raha ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Matetika ny mpanjifanay dia mangataka amintsika matetika momba ny fomba fametrahana tranonkala tao Abu Dhabi amin'ny marika Arabo eo an-toerana.
Satria tsy lavitra ny tsena ity ary ahoana no ahafantaran'ny tsirairay na tsia Dubai no tanàna lehibe indrindra rehefa tonga amin'ny fampandrosoana ara-teknolojia ao UAE.
Ny orinasam-pifandraisana lehibe indrindra dia manana ny biraony eto, ohatra, Orange sy Microsoft. Miatrika toerana ihany koa ny marika ao amin'ny UAE dia ampahany iray izay atolotray hatrany amin'ny mpanjifanay.
Ary ny ampahany faharoa manampy amin'ny fampiroboroboana ny vokatra ananany ao amin'ny tsenam-bidy Dubai Arab. Ny orinasanay dia nahomby tamin'ny orin'asa an-jatony tao Polonina, Etazonia ary Kanada. Niasa teo amin'ny tsena iraisam-pirenena koa izahay, anisan'izany ny Dubai, Angletera ary Amerika Latina.
Positioning of Dubai Sites - Ao aminay dia ho ao amin'ny Top Google 10 ianao!
Ny toerana misy anay dia andiana fitaovana noho ny tranonkalanao Ho hita eo i Dubai ao amin'ny milina fikarohana. Amin'ny fampiasana ny orinasanao dia hanana serivisy toerana fanaovana asa matihanina ho an'ny tranonkala ianao.
Raha nanontany tena ianao ny fomba hisehoan'ny orinasanao amin'ny Top 10 ao amin'ny Google, dia mangataha anay hametraka ny tranonkalanao. Ny orinasanay dia manana ny foibeny ao Dubai ary manolotra toerana tsara indrindra ny tranokala dia tsy ao amin'ny faritr'i Golfa ihany fa ao Polonina ihany koa, ny Fanjakana Mitambatra ary koa tany ivelany toa an'i Indonezia.
Ahoana no ahafahantsika manao SEO ho anao ao Dubai?
Mampiasa ny orinasanay ihany no voaporofo fa fomba mahomby amin'ny fananganana an'i Dubai. Manome anao vokatra tsara foana izahay ary mahomby indrindra amin'ny fametrahana ireo fehezanteny tsara indrindra ao amin'ny milina fikarohana toa an'i Yahoo, Bing ary Google. Ny orinasanay koa dia manandrana manampy ny mpanjifany amin'ny fampiroboroboana ny vokatra ao amin'ny media sosialy.
Etsy ankilany, Nahazo jiro maitso i Dubai ho an'ny fanitarana ny Maxima, tetikasa vaovao ho an'ny mpanjifa bebe kokoa. Ny drafitra vaovao ataontsika eo an-toerana dia misy sinema ao amin'ny toerana vaovao misy anay.
Manasa anao izahay hanamarina ny orinasanay amin'ny Google. Mankanesa ao amin'ny Company Dubai City ary mitsambikina tsara tsara amin'ny fametrahana tranonkala.
Ohatra, izahay dia niasa teo amin'ny vavahadin-tsenan'i Naukri toy izany toy ny Facebook na LinkedIn na ny Twitter. Nanampy ny mpanjifa an-jatony teo akaikinao isan'andro i Dubai City Company, handray fampahalalana sy endrika vaovao ho an'ny toerana misy ao amin'ny Dubai.
Hanangana orinasa lehibe ho anao amin'ny aterineto izahay!
Ekipanay manam-pahaizana momba ny tsenam-bola karatra Dubai. Hamorona karatra momba ny Google Map ho anao, mazava ho azy. Hamorona ny tranokalanao ao amin'ny Facebook sy Twitter izahay. Hanampy anao izahay handefa fonosana mailaka fototra amin'ny mpanjifanao izay efa nividy ny vokatrao.
Raha manapa-kevitra ny hiara-hiasa aminay ianao dia manolotra vahaolana isan-karazany ka mahafaly anao ary manomboka ny mitondra ny tombotsoanao atsy ho atsy ny orinasanao dia asaina ho henjana ho azy izany. Manolotra vahaolana mahazatra ho an'ny mpanjifanay, ohatra, fanentanana dokambarotra ao amin'ny Facebook na manampy amin'ny fahazoana mpanaraka ao amin'ny Instagram.
Ny orinasantsika dia nanangana an'i John West tany Dubai taona maro lasa izay. Hatramin'izay, manana portfolio lehibe izahay orinasa sy mpiara-miasa aminay izay iarahantsika miasa. Anisan'ny zavatra hafa, any Krakow, Wroclaw ary Poznan.
Manantena izahay fa homena anay vazo manampy anao hanitatra ny orinasanao legionaire. Nahita anay tao amin'ny motera fikarohana an-tserasera izahay, ary ny hetsi-pitenenana afaka milaza fa azo itokisana sy miasa mafy isika. Ny asa any Dubai dia tsy mitsaha-mitombo ary mihoatra ny 30% amin'ny orinasam-baovao dia manokatra ny biraony ivelan'ny distrika Dubai.
Sekoly marketing - mety hahita ahy an-tserasera ianao!
Manana orinasam-barotra lehibe sy hery ara-toekarena lehibe ny Dubai eto amintsika. Araka ny filazan'i Google sy Facebook, mandritra ny herinandro dia mihoatra ny 150,000 ny olona manampy ny tanàna ho mpampiasa ny tambajotra sosialy. Ary koa, mila mieritreritra ny manjaka amin'ny Internet ianao alohan'ny hanaovana ity orinasa ity ho anao. Ka ao amin'ny Dubai, mbola azo atao ny maka ny tsena satria tsy midadasika ny fifaninanana ohatra ny any amin'ny distrikan'i Sharjah na afovoan-tanàna. Ho an'ny 5 hatramin'ny 10 taona hatramin'ny namakianao izany bilaogy. Azo inoana fa ny orinasa manolotra ny vokatra avy aminy dia hanjaka amin'ny tsena.
Hamafiso ny orinasa ny Emirà Arabo Mitambatra miaraka aminay!
Noho izany, ianao amin'ny maha-mpandraharaha iray dia mila orinasa mahay mandrisika izay mahay manangana orinasa an-tserasera. Ao Dubai, maro ny fanatanjahantena vaovao sy ny hetsika ara-kolontsaina nohavaozina hatrany.
Ka tsy ilay antsoina hoe eo an-toerana ihany no ho liana amin'ny vokatrao. Fa misy koa ny olona tonga eto mandritra ny lalao na ady totohondry izay matetika atao ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra Arena.
Ny fomba fijery ihany koa dia mendrika tokoa ny haka omby amin'ny tandroka ary mametraka orinasa amin'ny Internet any Dubai. Ny tanjona lehibe hataon'ny orinasanay dia ny fametrahana anao ho orinasa mpitarika eo amin'ny tsenan'ny UAE. Any Emirates Misy toerana maro azonao tratrarina amin'ny alàlan'ny Internet, ohatra ny ivon'ny fanatanjahantena Arena Dubai. Avy eo, ny tobin'ny tanàna izay misy ivon-serasera fifandraisana mahery vaika sy Museum manan-tantara izay matetika ny tanora tonga amin'ny fitsangatsanganana an-tsekoly.
Ny toeran'ireo Antoko Dubai - Omeo fotoana hiseho eo amin'ny tontolo virtoaly ny tenanao. Mamindra ny orinasanao amin'ny Internet ary manomboka mahazo ny mpanjifanao mpandraharaha amin'ny Internet. Ampitomboy ny varotra ampitomboina ny tombony.
Hamafiso ny fahaverezana Dubai. Ho lasa mpiara-miasa aminay ao Dubai.
Toeran'ny pejy Dubai? - Miaraka amin'ny orinasanay!
Orinasa azo antoka no azonao itokisana amin'ny zato isan-jato. Raha te hiresaka sy hahita bebe kokoa ianao na hanana fanantenana manokana izay tokony ho fantatrao. Ny orinasa Dubai City dia manasa anao amim-pitiavana hifandray amin'ny solontenan'ny orinasa na ny tompony.
Hamaly ny fanontanianay rehetra izahay. Ny ekipanay SEO sy ny Marketing hanampy anao hisafidy paikady ara-barotra midadasika be sy fototra ho an'ny fampandrosoana ny orinasanao. John West dia hanoro hevitra momba ny fomba hahazoana klioba amin'ny Internet. Manary dokam-barotra kely an-tserasera izahay eo amin'ny tsenan'ny Arabie Arabo, ny tsenan'ny dokambarotra Dubai Online. Ary tena tianao ny mpanjifa vaovao.
Tsy ho diso fanantenana ianao amin'ny fiaraha-miasa aminay. Azonay manampy fotsiny aminao fa tsy manam-pahaizana manokana amin'ny IT isika, manana fianakaviana isika ary fantatsika ny dikan'izany ho tompon'andraikitra sy azo antoka amin'ny fiarahana miasa amin'ny mpanjifa. Ka raha te hanankina ny orinasanao amin'ny tanana havanana ianao dia mamporisika anao izahay hiara-miasa amin'ny olona mihoatra ny 30 noho ny antony mazava.
SEO avy amin'ny ekipanay? Miantso androany ary mandamina fepetra maimaim-poana!
Miara-mitantana amin'i John West - Marketing Google - manomboka amin'ny 2009 izahay SEO!
Mivarotra amin'ny Google! - Ny bilaogy Dubai City Company dia vao nanomboka. Ny bilaoginay dia ny SEO sy ny Internet Marketing amin'ny Google sy Social Media. Izany dia ahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fametrahana tranonkala ho an'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fitsaboana momba ny SEO.
Manasa anao izahay hametraka tsikera, fanontaniana ary fahalianana. Inona no hosoratanay ao amin'ny blaoginay?.
Momba ny zava-drehetra atolotry ny orinasa afak'i Dubai ao Eropa, London, Emirates ary Etazonia Izany rehetra izany dia eo amin'ny fametrahana pejy ao amin'ny Google. Andoavam-bola amin'ny alalàn'ny AdWords, manova pejy ao amin'ny sarintany Google. Hiresaka kely momba ny vaovao avy amin'ny tontolon'ny media sosialy isika.
Hiezaka izahay hanazava aminao kely ny mombamomba ny toetran'ny milina fikarohana any Polonina sy ny fomba fiasan'ny Marketing amin'ny Google.
Ireo manampahaizana manokana dia hampiasa fampahalalana tsotra sy fomba fitsapana tsara sy torohevitra amin'ny fametrahana tranonkala eo an-toerana, ohatra hoe ahoana ny fametrahana tranokala ao Legionowo ?. Ary momba ny vaovao mifandraika amin'ny varotra Internet sy ny dokambarotra an-tserasera. Amin'ny famintinana - momba izay tiantsika indrindra
Eto ambany eto ianao dia hianatra ny fomba fampiasana fitaovam-pivarotana matihanina sy ny fomba hampandrosoana ny orinasanao amin'ny aterineto eo amin'ny tsena eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Hanome vaovao anao momba ny fametrahana tranonkala izahay. Ary antenainay fa ho takatrao ny fomba fampiasanao ny aterineto sy ny fitaovana ampiasainao mba hanombohanao ny zava-niainanao tamin'ny fanaovana varotra ao amin'ny Google.
Atombohy ny fametrahana ny tranokala!
Manaova marketing anao manokana asa any Dubai!
Fampandehanana amin'ny Google?
Ny Google Marketing dia tokony hozaraina ao amin'ny departemanta 13 samihafa. Saingy alohan'ny hahatongavantsika eto dia hanoratra kely aminao aho momba ny Google ary inona ny mozika fikarohana Internet. Noho izany Google, na dia eo aza ireo hevi-diso, dia ny Search Engine ho an'ny lahatsoratra fa tsy ny orinasa fikarohana. Ny fivarotana an'i Google dia tsy ny fanodikodinana ny loka ao amin'ny milina fikarohana. Koa raha miresaka momba ny varotra madio ao amin'ny Google isika, dia mampiroborobo ny votoaty tsara ho an'ireo mpandray izay liana amin'izany. Ary izany no antsoinay hoe Google marketing.
Ny fampiroboroboana ao amin'ny Google dia ny fanadihadiana ny angon-drakitra. Ohatra, ny fomba fandinihana ny angona sy ny fampiasana Google Analytics. Hampitombo ny fizotry ny raharaham-barotra an-tserasera. Ny olana manaraka eo amin'ny tsenam-pivarotana ao Google dia ny fanangonana sy fanadihadiana ny fampiasana angon-drakitra hampita izany amin'ny fampahalalana mahasoa izay mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny orinasanao.
Tsia. Google Analytics sy fandalinana angona
Naheno vaovao momba ny Google Analytics ianao dia fitaovana ampiasaina amin'ny mpividy mba hanamarina ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao amin'ny loharano samihafa. Google dia manome fitaovana ahafahanao manamarina ny isan'ny olona ao amin'ny tranokalanao ankehitriny. Ankoatr'ireo zavatra hafa, fotoana tena izy, ka azonao atao ny manamarina ny fahitana, ny toerana, ny loharanom-pidirana, ny votoatiny, ny hetsika na ny fifanakalozan-kevitra avy amin'ny fametrahana an'i Google na dokam-barotra na tranonkala hafa.
Ampidiro ao amin'ny Google Analytics ny vohikalanao fa tsy maintsy manana Google Gmail ianao. Azonao atao ny mamorona azy ety ambany fotsiny eo amin'ny sary.
Avy eo dia midira amin'ny kaonty Google Analytics izahay ary mamorona kaonty vaovao hanampiana ny tranokalanay.
Raha vao mamorona kaonty ao amin'ny Google Analytics izahay, dia tsindrio ny fitantanana. Misintona ny kaody hita ao amin'ny tranokalan'ny Google Analytics ary mampifandray izany amin'ny tranokalanay. Hanampy antsika hampiditra sy hanara-maso ny mpanjifanay haka ireo angona momba ny fijanonany ao amin'ny tranokalanay.
Ary mifototra amin'ny vokatra azonay ao amin'ny Google Analytics, afaka mahita izahay raha tia ny tranonkalanay na ny mijery sy miala. Mihevitra i Google fa amin'ny antsalany dia tokony hijanona iray minitra eo ho eo ny mpividy iray na tsia eo amin'ny tranonkalantsika mba hahafantaran'ny mpamorona azy ho toy ny mpanjifa sarobidy.
Avy eo, maka ny code tracking izay havoakan'ny Google Analytics
Eny ary, manana ny kaody Google Google izahay izay hanara-maso ireo rehetra nitsidika ny tranokalantsika. Ankehitriny izao dia tokony hampiana ity kaody ity amin'ny tranokalanao. Ny ankamaroan'ny webmaster dia mampiasa ny WordPress ho sehatra iray hananganana tranonkala. Ny ankamaroany satria arovana tsara ary havaozina tsy tapaka.
Tsarovy mandrakariva ny fivarotana amin'ny Google, dia ny fanadihadiana ny angona avy amin'ny milina fikarohana.
Noho izany, tsindrio ny menu's main WordPress. Ampio plugin vaovao. Avy eo dia mikaroka ny iray amin'ireo plugins voafidy etsy ambany.
Ny tsara indrindra dia: Dashboard Google Analytics ho an'ny WP amin'ny ExactMetrics (teo aloha GADWP)
Mametraka sy manantona ny plugin amin'ny Wordpress
Arahabaina, ny plugin anao dia tokony ho mavitrika amin'ny WordPress. Ny ampitso dia tokony ho afaka hanaraka ny olona rehetra mitsidika ny tranokalanao ianao.
Misaotra ny Google Analytics, azonao atao ny manamarina ny toerana misy ny mpanjifa tonga ao amin'ny tranonkalanao. Tsy voatery ho avy amin'ny Google izy ireo, mety ho avy amin'ny fitaovam-pitadiavana hafa na avy amin'ny loharanom-baovao mivantana, ohatra amin'ny mailaka mailaka na olona iray nanoratra ny anaran'ny orinasa tao amin'ny motera fikarohana ary niditra mivantana tamin'ny rohy.
Tsia ny Strategy Business an'ny 2 mendrika ny fisarihana Google
Azonao atao ny mijery ny habetsahan'ny olona hiditra sy hamela ny tranonkalanao. Ankehitriny dia tsy maintsy misafidy ny tetikady ara-barotra hentitra ho an'ny orinasanao ianao. Fianakaviana eo amin'ny fivarotana na izay tolotra omenao ho an'ny mpanjifanao. Azonao atao ny mifidy avy amin'ny dokambarotra mivantana, dokambarotra an-tserasera, media sosialy na lahatsoratra manentana ny raharahanao amin'ny tranokala hafa.
Ny tetik'asa ara-barotra tsara indrindra izay efa noforonina dia tsotra. Manàna vokatra tsara kokoa noho ny orinasa hafa. Na dia manana ny varotra tsara indrindra manerana izao tontolo izao aza ianao ary ny vokatrao dia tena mahantra ny Google dia hahalala izany. Ny antony dia satria hitady ny orinasanao ny olona, ​​ohatra miorina amin'ny andian-teny. Nividy fiara avy amin'ny orinasa aho sy ny fomba hiverenan'ny fiara ho any amin'io orinasa io. Efa manondro ny motera fikarohana fa misy zavatra tsy mety amin'ny orinasanao.
Tsiambaratelon'ny Elon Muska: hanangana an'i Tesla, nanala ny ampahany amin'ny Mercedes CLS izy
Noho izany alohan'ny hanombohanao hampiroboroboana ny raharahambarotra dia diniho tsara ny fanatsarana ny tranokalanao na ny vokatrao. Ny orinasako, izany no orinasa Dubai City taona lasa izay, dia nianjera tamin'ny tsy fahafahany namaha olana sy nampiasaina ary vola tao amin'ny varotra Internet. Koa satria miahiahy anao amin'ny voalohany aho, dia tsy nanome ahy be izany. Super marketing ny zava-drehetra dia tsara, saingy indrisy fa entina ny vokatra. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka nitady orinasan-tserasera hafa ny isa ary niakatra ho any amin'ny Google ny orinasa.
Ary koa, ny famintinana ny vokatra Google dia manan-danja tahaka ny vokatra eny an-tsena. Mieritrereta an'i Google bebe kokoa amin'ny fifanakalozana fifanakalozana. Hiditra ao amin'ny Warsaw Stock Exchange ihany ve ny orinasa iray izay vao nanomboka fiaraha-miasa ary namolavola ilay antsoina hoe fanombohana. Raha ny tena izy dia ny 1-1000000 no lesoka. Mazava ho azy, nisy ny orinasa izay nanjary be mpitia, satria manana vokatra manokana toa ny Uber sy ny boaty. Mazava ho azy fa nahita ity mpampiasa vola ity haingana ity orinasa ity ary nanome ny iray amin'ireo pejy voalohany tao amin'ny milina fikarohana i Google.
No.3 Content ao amin'ny Google amin'ny Google
Ny famokarana votoaty ao amin'ny Google dia tena manoratra lahatsoratra marina sy fampahalalana ho an'ny mpanjifa mety na ny olona salama mitsidika ny tranokalantsika. Ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra fa manoratra lahatsoratra amin'ny ankapobeny ny mpivarotra afa-po amin'ny alalan'ny fitaovan'ny aterineto izay hametraka ity lahatsoratra ity amin'ny pejy voalohany. Mazava ho azy fa diso hevitra io satria tsy misy ifandraisany mihitsy izany. Noho izany dia ny marketing marketing no mamorona ny votoaty sy ny votoaty tsara indrindra amin'ny lohahevitra iray.
Ohatra, mamaritra ny fampahalalana ary manara-maso ny lohahevitra iray izay mbola tsy nampidirina tao amin'ny tranonkalan'ny Internet na tranokala hafa. Noho izany dia ny dokam-barotra votoaty dia tokony ho lahatsoratra tokana izay nosoratanao manokana na ny orinasanao dia nampiditra an-tserasera ary mbola tsy nisy fiovana teo aloha. Matetika, ny varotra ao amin'ny tranonkala dia ampiasain'ny orinasa forbes sy media sosialy.
Amin'izao fotoana izao, ny haino aman-jery amin'ny votoaty dia tarihin'ny tsikera kanto. Iza no manara-maso ny lahatsoratra rehetra ary mora kokoa ny mamaky sy mahatakatra azy io amin'ny ambaran'ny asa sy ny fahazoana ny olombelona. Ankoatra izany, na dia te hanangana ny tranonkalanao izay tsy manana votoaty tsara aza ianao ary tena malaza dia mbola tsy azo atao mihitsy izany.
Amin'ny fampiroboroboana amin'ny aterineto ny fanambarana toy ny votoaty dia ampiasaina matetika ny Mpanjaka. Noho izany amin'ny teny poloney, ny votoaty dia manjaka ao amin'ny Internet. Ny orinasa tsara indrindra izay manana ny laharam-pifaneraserana ambony indrindra dia mety ho tsara indrindra ho an'ny mpandray azy. Io votoaty io dia mazava ho azy fa nosoratana tsara sy raisin'ireo mpanemotra ary dia eo foana ny lohahevitra izay mety ho mpitsidika ny tranonkala tadiaviko.
Karazana lahatsoratra ao amin'ny vohikalan'ny votoaty araka ny Wikipedia
Wikipedia eto dia manasongadina tsara Ny tokony ho ny fivarotana votoaty ety anaty aterineto ary inona no hikaroka eto ambany ny pinecone izay nanamboarantsika ity lohahevitra ity. Jereo izay tokony hifantohanareo alohan'ny hanombohanao hanoratra lahatsoratra sy vaovao ao amin'ny Internet.
Bilaogin'ny Corporate - tokony ho ampahany matanjaka ao amin'ny tranonkala na miasa eo ambanin'ny adiresy mahaleotena toy ny poland wordpress. Ireo bilaogy ireo dia efa nodinihina matetika ary matetika indraindray ny ampahany amin'ny lahatsoratra dia avoaka amin'ny Internet. Satria ny fampahalalam-baovao efa tranainy sy ny orinasa goavana dia mandinika ny votoaty avoakany.
Ny bilaogy Peronal - Izany dia famaritana ny zava-nitranga nitranga teo amin'ny fiainanao, ohatra, fitsangatsanganana tany ivelany na fanamarihana na ny eritreritrao manokana. Ary maro ireo mpitoraka blaogy, ohatra, manao ny lahatsary ao amin'ny YouTube ary manampy amin'ny bilaogy.
Online Tutorials - votoaty mifandray akaiky amin'ny vokatra, ny serivisy sy ny serivisy atolotra atolotra. Torohevitra matetika ho an'ny mpividy ao amin'ny Allegro na OlX. Noho izany dia ireo fampahafantarana tena manokana izay azonao omena ny mpandray anao, ohatra ny momba ny fanamboarana na famerenana fiara. Izy ireo dia votoatim-pitantanana tsara indrindra satria mitondra fampahalalana tena mahaliana izy ireo ary mamaritra amin'ny antsipirihany amin'ny antsipiriany izay tadiavin'ny mpanoratra hifantoka.
Ny votoaty nosoratan'ireo manam-pahaizana - lahatsoratra nosoratan'ny olona izay tao amin'ny orinasa nandritra ny taona maro. Ireo fitaovana azo antoka ireo dia tsy miankina afa-tsy ny fampahafantarana azo antoka sy ny fampahalalana afa-tsy izay voamarina ary matetika mifandray amin'ny votoaty azo antoka sy azo antoka. Ohatra, tranokalam-baovao avy amin'ny governemanta na masoivoho vahiny. Ireo dia matetika fampahalalana izay efa mamaritra lohahevitra iray. Na izany aza, manandrana manazava ny lohahevitra lalina izy ireo ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia nofaritan'ireo manam-pahaizana amin'ny sehatra iray nomena ireo loharanom-baovao azo antoka.
Resadresaka amin'ny aterineto - Matetika, manentana votoaty ao anaty aterineto ireo. Ny ankamaroan'izany dia zava-dehibe amin'ny orinasa izay mampiroborobo ny vokatra. Matetika, ohatra, Kim Kardashian dia ambasadera marika na, ohatra, mena mampiasa kintana ara-panatanjahantena ny redbull mba hampiroborobo ny marika. Famelabelarana ny marika amin'ny resadresaka Olom-boafidy sy fanta-daza, ohatra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny filohan'i Microsoft na Apple navoaka tao amin'ny gazetin'ny orinasa.
Podcasts amin'ny aterineto - Podcasts tsy anisan'ny votoatin-tsoratra voasoratra. Na izany aza, matetika dia mikaroka ireo podcasts izay ataon'ny olona mahafantatra tsara ny indostria, ohatra, ny youtubers na ny fahitalavitra iray. Na dia izany aza, misy podcast azo soniavina ary matetika ireo olona mamoaka podcasts ao amin'ny tranonkala dia manampy dikanteny amin'ny fiteny maro, noho izany dia anisan'ireo dokam-barotra voasoratra.
Famerenana amin'ny aterineto - ny mahomby indrindra amin'ny Google. Raha nataon'ireo olona natokisana izy ireo ary notsapaina. Ohatra, avy amin'ny mpamaham-bolongana. Matetika, indrisy fa, tsy marina ny fampahalalana marina. Satria maro ny orinasa mampiasa ny fampahalalana tsy marina momba ny orinasa. Indrisy fa ny fotoana rehetra hita ao amin'ny aterineto. Mila mandinika manokana ianao raha mikasika ny fahefan'ny lahatsoratra nomena na ny podcast omena amin'ny Internet. Mazava ho azy, orinasa lehibe toy ny Business insider Polska. Tsy ny banky Poloney ve no hanararaotra ny references amin'ny sandoka. Noho izany dia mendrika ny hanamarina izay nanoratra izany na nanasonia izany.
Famaritana momba ny vokatra - lahatsoratra sy fampahalalana momba ny vokatra, ohatra amin'ny tranombarotra an-tserasera. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, izy ireo dia mameno ny mari-pamantarana sy ny toetrany izay voatanisa ao amin'ny karatra vokatra, izay mampiavaka ny vokatra toy ny WooCommerce Poland.
Famerenana ao amin'ny Google Maps - Amin'izao fotoana izao Google dia namorona ny Google My Business tany Polonina. Noho izany fitaovana izany, afaka manara-maso ireo orinasa sy orinasa madinika eny an-tsena eo an-toerana isika. Afaka mamaky sombintsombiny momba azy ireo izahay ary ny tena mpampiasa tranonkalan'ny fikarohana anaty aterineto dia milaza momba ny orinasa iray nomena. Fitaovana fampivelarana haingam-pandeha haingana ao Polonina.
Tsia. Fampahafantarana amin'ny Internet
Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa ny dokam-barotra amin'ny aterineto dia AdWords fotsiny. Mazava ho azy, fahadisoana izany satria ny dokambarotra an-tserasera dia hevi-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny vokatra.
Azo sokajina ho sokajy roa ny dokambarotra. Ny voalohany amin'ireo dia ho dokambarotra maimaim-poana. Ao amin'ity sokajy ity, ohatra, mieritreritra ny bilaogin'ny olona iray. Ohatra, mpitoraka bilaogy iray nanao sarimihetsika tao amin'ny YouTube ary nanoratra lahatsoratra momba ny vokatra azonao.
Taty aoriana, nampidiriny tao amin'ny vohikala ity ary nampidirinao ny rohy ary dia mahazo dokambarotra maimaim-poana avy amin'ny milina ianao. Matetika, dokam-barotra maimaim-poana ihany koa ny fampahalalana avy amin'ny tranokala iray momba ny orinasa. Ary ny ankamaroan'izany dia tsy mandray karama satria orinasa iray, izay, ohatra, manolotra bisikileta mividy. Ary ny orinasanao dia manolotra ampahany amin'ireo modely bisikileta ireo.
Hanampy ny fampahalalana momba ny orinasa izay ahafahanao manangona ireo ampahany ireo ho an'ny bisikiletany dia dokambarotra maimaim-poana avy amin'ny tranonkalany eo amin'ny fitantanana ny orinasa.
Ny ampahany faharoa amin'ny dokam-barotra dia azo antsoina hoe dokam-barotra. Ireo dia dokam-barotra izay orinasa hafa manome ny dokam-barotra mba hahafahany mamokatra vokatra ho an'ny mpanjifany. Ohatra, manentana ny lahatsoratry ny OLX ny Facebook, manome anao fahafahana hanandrana ny sora-baventy ataonao. Linkedin dia mamorona dokambarotra mivantana izay azo alefa any amin'ny vondrona mpanjifa izay liana amin'io vokatra io. Ohatra, Twitter dia manao dokam-barotra ho an'ny faritra iray, ohatra an'i India na Amerika. Ny dokam-barotra dia tsy mitovy amin'ny hoe olona maro no hahazo vaovao momba ny orinasa. Ohatra, antsoina hoe pop-up na sub-manual. Ireo rehetra nahazo fampahalalana momba ny vokatrao na ny orinasa ary ianao dia mandoa any amin'ny orinasa hafa noho ny fampiroboroboana ny vokatrao sy fizarana vaovao momba ny marikao dia antsoina hoe dokam-barotra amin'ny Internet.
Koa amin'ny famaranana, moa ve sarobidy amin'ny fametrahana dokam-barotra? Miankina amin'ny vokatra azonao amidy sy ny vidin'ny soso-kevitrao amin'ity vokatra ity. Ny olana manaraka dia mazava ho azy fa ny fifaninanana raha toa ka mampiroborobo io vokatra io ihany koa izy eto amin'ity tsena ity satria ianao sy ny halehibeny ary ny fifaninanana. Satria indraindray mandoa dokam-barotra ary tsy mamoaka vokatra goavana raha toa ny orinasam-pandraharahana dia orinasa lehibe. Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra ny hampiasanao vola amin'ny sehatry ny varotra hafa, ohatra Facebook na mailaka mailaka. Satria raha misy orinasa nomena, dia lazao, PLN 100,000 ao amin'ny AdWords, ary isam-bolana dia lasa malaza ny tranonkalany ary ny vokatrao dia hanaraka ny fenitra rehetra. Mampalahelo fa na dia avo loatra aza ny vokatrao, dia mbola mila mahita izay atolotra anao ny mpanjifa. Ary amin'ny tsenan'ny fifaninanana, indrisy, tena mavesatra izany.
Nr.5. E-varotra ao amin'ny Internet
E-varotra fampiroboroboana E-varotra mba hahatongavana amin'ny mpanjifa. Na izany aza, eo am-pelatanan'ny manampahefana marketing tsara dia azo ampiasaina ho fampahatsiahivana ny vokatrao. E-varotra dia manana fitaovam-pivoarana be dia be, ohatra, nesorina ny Cart - izany hoe, raha miditra ao amin'ny tranonkalanao ny mpanjifa ary manampy amin'ny sarimihetsika. Ity ecommerce ity dia azo ampiasaina ho rafitra fanoratana maimaim-poana ho an'ny tranokala an-tserasera. Noho izany, ny mpividy dia miditra sy mametraka ahy rehefa avy nahazo mailaka miaraka amin'ny vokatra izay efa nampiany ary ny zavatra rehetra tokony hataonao dia manao fanonerana.
Izany dia rafitra ara-barotra tsara indrindra izay miasa amin'ny 90% eo amin'ny tsena rehetra. E-varotra sy ireo karazan-javatra mahaliana izay azo ampiasaina amin'ny orinasa madinika. Ohatra, manampy amin'ny lisitry ny lozam-pifamoivoizana na famoronana lisitra vaovao tianao azonao ampiasaina any aoriana. Ny ankamaroan'ny olona dia manao izany tsara, satria, araka ny fantatra rehetra, ny andro dia 24 ora fotsiny. Ary misy andraikitra be dia be ny ankamaroan'ny olona tena mila fampahatsiahivana momba ny vokatrao na dia te hividy zavatra ary olona iray niantso azy ohatra ohatra rehefa mividy ny vokatrao. Ilaina ny mandefa amin'ny milina rehefa afaka andro vitsy ny momba ny lohahevitra Hello, tianao ny hividy vokatra izay adinonao hanampiana ny fandoavam-bola. Vonona ny hividy amin'ny ho avy ianao.
Izany koa dia endrika fampiroboroboana tsara, fa tsy endrika mivarotra mivantana. Noho izany alohan'ny hamoahanao mpanjifa avy amin'ny Internet ary avy eo dia ampahatsiahivo azy fa misy isika. Matetika, orinasa maro no mampiasa fampahatsiahivana toy izany, ohatra, pracuj.pl.
No..6. E-mail marketing
Izany no fomba mahomby indrindra amin'ny varotra Internet efa noforonina tao amin'ny aterineto. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa tsy misy ny fivarotana marobe tsy misy, ny olona dia tsy mamaky mailaka avy amin'ny dokam-barotra sy ny sisa. Mampalahelo fa efa imbetsaka izahay ary afaka miteny toy ny mpivarotra miasa any amin'ny tsenam-barotra any Polonina fa mbola misy ny laharana voalohany. Manao ahoana izany ?. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manam-potoana hanamarina ny fampahalalana ao amin'ny aterineto, mijery tele na mipetraka miaraka amin'ny ankizy. Ary tampoka dia nahazo vaovao tamin'ny alàlan'ny mailaka aho ary nampahafantatra ahy fa misy ny soso-kevitra.
Ahoana no fomba hamoronana tatitra amin'ny fampiasana Mailchimp?
Jereo ny fomba fananganana fanentanana amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fandaharana tsara indrindra, mazava ho azy, dia ny mailchimp izay mandefa mailaka mailaka ary ireo mpanjifa mandray mailaka avy amin'ity fandaharana ity dia miditra foana any amin'ny mailaky tsy misy spam, manasa anao hijery ity programa ity ary mametraka ny mailaka mailaka. Ity orinasa ity, mazava ho azy, dia manome maimaim-poana mailaka roa arivo isam-bolana.
Ny Kowalski dia miditra ao amin'ny tranonkala amin'ny fipihana ny dokam-barotra amin'ny finday. Ary raha efa teo amin'io tranonkala io izay nahazo dokam-barotra tamin'ny endrika mailaka mailaka. Avy amin'ny milina, ny orinasa izay nandefa azy dia mahafantatra fa mety liana amin'ny mpanjifa izay vokatra atolotr'ity orinasa ity ny mpanjifa. Koa ho tonga voalohany ny mpanjifa, tsy hividy zavatra kely izy, fa izy kosa dia miaraka amin'ny marika. Rehefa afaka fotoana fohy dia hahazo mailaka indray izy, ohatra amin'ny fihenan'ny minus 20%. Noho izany dia hieritreritra an'izany aho. Ny vokatra tsara hitako dia in-droa izao no nahazoako ny karazan-drakitra naloany mba hividianako entana, mividy raharaham-barotra iray.
Izany no fomba fiasan'ny mailaka. Tena fitaovana mahomby mahomby izay efa noforonin'ireo manam-pahaizana IT. Satria tsy manelingelina ny fiainan'ny olona aho ary tsy mila miditra ao amin'ny tranokala na mamaky vaovao ny mpividy izay mividy entana avy amintsika. Avy amin'ny solosaina ihany no mandefa mailaka momba ny tolotra vaovao avy amin'ny vokatray na ny fivarotana amin'ny aterineto. Manampy ilay poketrany ny vokatra azonay nalefa tao amin'ny mailaka ilay milina. Ary avelao ny dimy ambin'ny folo segondra raha hividy vokatra iray izay handefa izany any aminareo.
Raha fintinina, ny mailaka mailaka dia tsy mitovy amin'ny marketing-vontoatin'ny votoatin-tserasera izay ahafahanao miverimberina any amin'ny mpanjifa. Ohatra, manana vokatra tiantsika hivarotana any aoriana isika, manana vokatra hafa enti-manana izay ananantsika isika. Ary miverina imbetsaka amin'ity mpanjifa ity izay tena manampy azy hahatakatra ny zavatra atolotr'ity orinasa ity. Eny, araka ny fantatrao. Raha nahita ilay fanintelony fanintelony ilay mpanjifa. Ho liana kokoa io vokatra io raha oharina amin'ny fotoana voalohany novakianao momba ny tranokalanay. Matetika dia hitanao ao amin'ny tranokalan'ny Adidas na Nike izany.
No.6 Marketing eo an-toerana
Mba hanaovana marketing marketing ao an-toerana dia mila mahafantatra izay toerana hampidirana ny tranonkalanao ianao. Ireto ambany ireto ny tranonkalanao 30 izay azonao ampidirina ny orinasa maimaimpoana ary hampiakatra ny laharana eo amin'ny tsena ao Dubai. Mazava ho azy, ny sasany amin'ireo tranonkala ireo dia antokon'ny vahiny saingy azonao atao ny mikaroka ny mason'i Google fa nampidirinao ny tranokala vahiny. Fa orinasa iray izay mahazo mpanjifa ao amin'ny UAE ianao ary te-hampiroborobo ny raharaham-barotra ao amin'ity tranonkala ity amin'ny alalan'ny teny filamatra tahaka ny fanadiovana ny kapoaka ao amin'ny faritra Golfa ao Dubai.
Raha efa namorona sarintany Google ianao. Tsara ny manisy toerana ny toerana misy anao amin'ny fikarohana Google any aoriana. Indrisy anefa, toy ny asa hafa rehetra amin'ny fametrahana tranonkala, dia mila fotoana lavalava izany.
Jereo ny tenanao eo amin'ny rohy ambany eto, tsy afaka mametraka ny tranonkalanao manokana ianao, fa koa ampidiro ny sari-taninao hametraka ny tenanao eo an-toerana. Ohatra, etsy ambany, araka ny hitanao, dia nampidirina rohy izay tsy vitanao ny manampy ny tranonkalanao ihany fa manampy sarintany miaraka amin'ny tranonkalanao izay hivoatra kokoa ao amin'ny lisitry ny Internet.
Ary koa, araka ny hitanao dia azo atao amin'ny lafiny maro ny fivarotana Google. Ampiasao any amin'ny tranokala toy ny Wirtualna Polska na Onet ny orinasanao. Anontanio ireo mpitoraka bilaogy mba hampidirina rohy mankany amin'ny tranonkalanao miaraka amin'ny reninao izay hampitombo ny toerana na ny hahatongavan'ny orinasanao. Izany rehetra izany dia tena marketing Google.
Tsy.6 Marketing amin'ny Google sy Mobile Devices
Olana sarotra be ny fitaovana finday sy ny fivarotana finday. Satria mba hampiroborobo ny orinasanao amin'ny olona iray avy aminao finday, mila mifantoka amin'ny antony maro ianao.
Tokony hitadidy isika fa tsy afaka manitatra loatra amin'ny dokam-barotra isika satria ireo finday ampiasaintsika dia mazava ho azy fa tsy manana super-large. Noho izany dia afaka mametraka dokambarotra iray na roa izay hipoitra ary ny ampahany A ireo dia antsoina hoe pop-ups. Ohatra, ny orinasanay dia mampiasa fitaovana hafa Patel. Mazava ho azy fa fitaovana maimaim-poana izany mba hampahatsiahivana ny mpanjifa momba ny raharaham-barotra.
Ireo mpandray anjara dia fitaovana lehibe hampahatsiahivana ny mpanjifanao momba ny raharaham-barotrao. Azonao atao ny mandefa ny fampahalalam-baovao antsoina hoe antso an-tariby mivantana amin'ny findainy amin'ny fotoana rehetra. Raha ny marina, ao anatin'ny segondra vitsy dia afaka mahazo mpanjifa am-polony maro izay efa nitsidika ny tranokalanao aho fa afaka ampahatsiahivina amin'ny fotoana rehetra.
Ny zava-drehetra tokony hataonao dia midira ao amin'ny tranonkalan'ny klioba alefako alefako avy amin'ny milina mandefa azy ireo amin'ny findainy amin'ny fotoana rehetra isan'andro. Tena manoro hevitra tokoa izahay ny hametraka ity fampiharana ity ao amin'ny tranokalanao satria hanampy anao hampitombo io fifamoivoizana io ao amin'ny tranonkala. Ny mpanjifanao dia tsy hiverina amin'ny tranonkala fotsiny fa hahazo vaovao momba ny vokatrao vaovao tianao ary te hizara vaovao vaovao momba ny orinasa amin'ny fotoana rehetra ahafahanao mifandray mivantana mivantana amin'ny fantsom-pahitalavitra hafa.
Nr7 SEM - Fidio ny teny fanalahidy
EACTIVE Nanoratra torolalana tsara momba ity lohahevitra ity izy. Ireto misy fanazavana momba izany sy ny fomba hafa amin'ny SEO ary ny fomba fampiasana ity fitaovana ity.
Etsy ankilantsika, tianay ny hampiditra tsipiriany vitsivitsy momba ny fomba hitadiavana ireo antsoina hoe teny malaza. Raha mikasika ny toerana ao amin'ny Google. Tsy maintsy mahatsiaro mandrakariva isika fa ny tena manan-danja indrindra dia ny fifaninanana izay iadianareo. Raha orinasam-baovao isika, tsy misy tokoa ny aterineto, tsy maintsy misy ny fiheverantsika fa ireo orinasa izay miasa amin'ny tsena nandritra ny taona maro, indrisy, dia mihoatra noho ny antsika.
Ka ahoana àry no hanamarina raha manana fahafahana isika mba hisian'ny aterineto. Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny fanamarinana fehezanteny manan-danja izay tiantsika hipoitra ao amin'ny tranonkala fikarohana dia amin'izao fotoana izao hoe Ubersuggest izay noforonin'i Neil Patel. Raha ny marina, izy no hacker voalohany amin'ny varotra Internet. Namorona rafi-pananganana vohikala any Amerika ho an'ny orinasa lehibe indrindra izy. Niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe toy ny Yahoo sy Google izy. Ary koa ny rafitra fandinihan-teny fototra mahomby indrindra amin'ny aterineto.
Soso-kevitra avy amin'i Neil Patel
Azafady mba tsarovy fa misafidy poloney rehefa mitady fikarohana. Ny fomba tsotra indrindra dia ny manoratra fehezan-teny manan-danja iray izay ahiahinao fa ny mpanjifa dia mitady any amin'ny orinasa hafa amin'ny aterineto. Aorian'ny fisafidianana, jereo ny fifaninanana sarotra ho an'ny fehezanteny nomena mandritra ny fametrahana ny tranokalanao. Mazava ho azy, ao anatin'ity programa ity ihany koa dia afaka mahita ny mpifaninana sy ny orinasa izay hiady ho an'ny toerana ambony ao amin'ny Google ianao.
KWFinder - môtera fiasa matihanina amin'ny fehezanteny manan-danja
Ny fitaovana manaraka azonao ampiasaina dia ny KWFinder. Izy io koa dia fitaovana izay tena manampy ny mpizaka vola hijery ny fifaninanana ary hitady ny fehezanteny tena miavaka. Samy nisedra olana izahay roa. Ary samy miasa tsara izy ireo rehefa misy dikan-teny fototra. Na izany aza, raha mitady sehatra tena mandaitra ianao, antsoina hoe teny malaza Long. KWFinder dia toa fitaovana tsara kokoa hikatsahana ny fehezanteny mety tianao hiditra ao amin'ny toerana misy anao sy ny SEO.
Koa raha te-hanomboka hividy amin'ny Google ianao, dia mila manazava ireo fitaovana roa amin'ny tena avo indrindra,
No.8 SEO - Valiny fikarohana malalaka
Amin'izao fotoana izao, ny olona tsirairay izay mamaky ity lahatsoratra ity dia te-hilaza amiko ity fanalahidy mahagaga ity izay hanampy azy hitsambikina eo amin'ny pejy voalohany amin'ny Google. Izany no fanalahidy ilainao hahafantarana, tsy lahatsoratra lava be. Jereo ity lahatsoratra ity izay nosoratanay ity lahatsoratra ity izay misy horonam-boky sy horonan-tsarinao. Izany no antony mahatonga ny robot Google ho tonga ao amin'ny lahatsoratra ary mahita fa manana ny isa marin'ny fehezanteny manan-danja izay tiantsika hapetraka ny tenantsika. Ohatra, tamin'ity lahatsoratra ity dia nampiasainay ny tsenam-barotra amin'ny Google. Tsy hoe fehezanteny izay nanome anay mpanjifa mahavariana tao amin'ny tranokala Internet. Saingy ny ankamaroany dia mila mahatsiaro fa ny mpamaky dia tena mpanjifantsika ary manoratra ho azy ireo.
Ny orinasanay dia tsy manoratra lahatsoratra velively amin'ny Google. Miezaka foana izahay hanoratra lahatsoratra mendrika ny famakiana sy torolàlana fanampiny. Ohatra, nandritra ny fitsapana nataonay tany Dubai. Maro amin'ireo lahatsoratra ato aminay no nijanona teo amin'ny 1,000 tao amin'ny Facebook. Ireo lahatsoratra, mazava ho azy, dia manana endri-tsoratra 3000. Izy ireo no voalohany voalohany 10 Google ho an'ny tenimiafina tena mavesatra izay ahitana fikarohana manodidina ny 3,000 views isan-kerinandro.
"Ny fototry ny dokambarotra Internet dia:"
B) Ny soratra amin'ny Worth Command Next
Mendrika foana ny hijerena izay ataonao ao amin'ny Internet amin'ny fomba fijerin'ny tranonkala iray. Okay, raha tsy te-handoa vola amin'ny dokam-barotra ianao ary tsy te handany vola aminy mba hividy mpanjifa vaovao ao amin'ny tranonkalanao. Tsy maintsy manana zavatra tena miavaka ao amin'io tranonkala io ianao. Noho izany, ny andininy lava sy marina dia tokony hanao ny fanitsakitsahana. Ny ankamaroan'ny mpangalatra izay manoratra vaovao amin'ny aterineto dia tsy manome lahatsoratra fohy kokoa noho ny tarehimarika 2000. Manoratra lahatsoratra izay manana endrika 4,000 Tsara, indrisy fa momba ny ora 10 ny asa azo antoka. Tsy mahafinaritra ny fivarotana Google, indrisy. Asa tena sarotra sy azo antoka eo amin'ny tetikasanao.
Nr.9. Social facebook facebook sy LinkedIn
Koa ny media sosialy no lohahevitra momba ny varotra ankafizintsika. Mampalahelo fa mbola tsy misy fiantraikany amin'ny fitaovam-pikarohana ny media sosialy. Ny hany vokatr'ireo antsoina hoe haino aman-jery sosialy ao amin'ny tranonkala dia ny fampiroboroboana tranokala amin'ireo mpampiasa hafa.
Amin'izao fotoana izao, ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy toy ny Instagram dia nanala ny fampitaovana ny angon-drakitra hitadiavana milina. Tsy fantatsika ny antony nitrangan'izany. Ny hany orinasa izay mbola mandefa vaovao momba ilay antsoina hoe ampahany amin'ny tranokalanao dia Facebook.
Na dia izany aza, misy zavatra iray mahasosotra ny fizotry ny fikarohana. Izany no antsoina hoe fandraisana andraikitra, izany hoe, ny fiheverana Poloney dia hoe firy ny olona hiditra sy hanao fihetsiketsehana ao amin'ny tranokalanao ary hanolotra bebe kokoa ny tranokalanao.
Ka inona no tena manome anao media sosialy amin'ny Marketing amin'ny Google?. Mazava ho azy fa mitondra olona maro mpanjifanao sy fanontaniana maro hafa izy ireo. Mazava ho azy fa mitaky fampitomboana ny teti-bola ara-barotra, ohatra, ho an'ny dokam-barotra voavidim-bola. Raha afaka manomana tsara ny olona amin'ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny dokam-barotra amin'ny olona iray ianao, dia azonao atao ny mahomby. Maro ireo olona no nanaporofo fa ny Instagram tenany ihany dia nianatra nahazo mpanaraka an-tapitrisa. Ary ao amin'ny Facebook, afaka nahazo vola dolara maromaro izy tao anatin'ny iray volana. Toa tsy mahagaga izany. Raha manana tranonkala tsara ianao ary fantatrao hoe ahoana no anaovana dokam-barotra, dia afaka manangana rejisitra maimaim-poana ianao.
Ny orinasanay dia mpisava lalana ary saika ny lehibe indrindra ao amin'ny Facebook sy amin'ny linkedin raha ny fampiroboroboana ny Dubai. Azonao atao ny manamarina izany amin'ny fipihana ny sary etsy ambany.
Nr.10 Fivarotana amin'ny Google sy Youtube?
Fantatrao ve ny maotera lehibe indrindra? Mazava ho azy fa Google izany. Ary ny motera fikarohana Internet manaraka aorian'ny YouTube. Koa ankehitriny ny olona 1000 dia manisy orinasa miaraka amin'ny sarimihetsika sy sarimihetsika iray. Nahoana, satria tsy manam-potoana hipetrahana sy hamaky lahatsoratra iray izay milaza ny endri-tsoratra 10,000. Ary alohan'ny hahatongavany amin'ny zato manan-jery indrindra, dia handany ny minitra 20 mamaky ilay lahatsoratra izy ireo. Matetika ny olona no kamo.
Koa ahoana no ahafahanao mahazo ny pejy Google voalohany. Raketo horonantsary an-jatony ao anatin'ny iray volana. Mazava ho azy fa toa sarotra ny manoratra horonantsary iray ary koa ny hanao lohahevitra tsara sy ny sisa. Amin'izao fotoana izao, afaka mividy orinasa manokana momba ny Allegro izay milevina amin'ny PLN 200. Ary tena tsy misy fahasamihafana eo amin'ny kalitao dia mitovy amin'ny firaketana an-tsarimihetsika ao amin'ny onjam-peo matihanina.
Tokony hieritreritra ihany koa ianao momba ny fampiroboroboana ny vokatrao sy ny orinasanao ao amin'ny YouTube. Ny orinasanay dia nahavita nandrisika ireo orinasa avy any Dubai. Nahazo fahombiazana mahagaga izahay, olona an-jatony maro no nijery ny orinasa ary nila izany ary polajował mbola lavitra. Ary tsarovy, ny paika rehetra dia mpanjifa mety ho hitsidika ny tranokalanao.
Raha te hampiasa tanteraka ny marketing Google dia tokony hianatra ny fomba fampiasana horonan-tsary an-tserasera. Anisan'ireo zavatra hafa, mamorona dokam-barotra misy teti-bola be dia be ary mazava ho azy fa mampiseho azy ireo ho an'ny firenenao. Miankina amin'ny serivisinao mivarotra, mety ho faritra Polonina ihany koa. Mazava ho azy fa tsy ny tsirairay no afaka mivarotra ny tolotr'izy ireo ao amin'ny YouTube. Fa ny lahatsary fampiroboroboana dia tena lafo ambany ambany PLN 50 izay azonao atao ao amin'ny Fiverr.com, ohatra.
Nr.11. Fanamafisana ny tranokala
Okay, nanao ny marketing ianao izay nampifandray ny Google Analytics, manana ny zava-drehetra ianao. Momba ny dokam-barotra ary efa namoaka ny e-mailanao voalohany. Izao no fotoana hanatsarana ny tranonkala ao amin'ny code html. Raha ny marina, mba hanaovana izany dia mila programa iray ianao. Tsy manoro hevitra anao izahay handevina ao amin'ny tranonkalan'ny vohikala izay tsy azonao an-tsaina momba ny fandefasana programa. Satria raha zara raha manao fahadisoana ianao farafaharatsiny, ny pejy iray manontolo dia mety ho voafafa ary ny zava-drehetra nataonao hatramin'izao amin'ny teny Wordpress na amin'ny sehatra hafa dia mety ho voafafa tanteraka.
Fantatsika amin'ny zavatra niainantsika fa na dia ny fanovana kely aza dia mety hanimba anao sy ny orinasa. Satria raha tsy azonao an-tsaina hoe inona marina no ataonao, dia afaka manao fahadisoana mahagaga izay handoa anao pejy. Indraindray, imbetsaka hatrany am-piandohana, ny orinasa dia nametraka ny vavahady hatrany am-piandohana. Satria tsy nifankahalala izahay, nanao hadisoana adaladala izahay ary tsy maintsy namorona ny zava-drehetra hatrany am-piandohana ary tena sarobidy aminay izany.
Ary tsarovy, tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny mety ho mpanjifa. Tahaka ny hadisoana ao amin'ny tranonkala. Ny mpividy saika 95% dia mamela ny tranonkala raha mahita fahadisoana izy ireo satria mahatsapa ho tsy azo antoka ary tsy tena resy lahatra fa azo antoka ny orinasanao. Tadidio fa ny marketing amin'ny Google dia mifototra amin'ny hevitrao manokana.
Famintinana ny ity ampahany
Ho famintinana, ato amin'ity lahatsoratra ity dia nianatra zavatra fototra vitsivitsy izay hanampy anao hahatakatra hoe inona ny fametrahana tranonkala. Raha toa ianao ka te hanangona tanteraka ny fahalalanao ary hahatakatra ny fomba fiasan'ny Internet. Tokony handeha amin'ny revolisiona Google eto ambany ianao. Hamarino sy hamita ireo fitsapana sasany izay hanampy anao amin'ny asa ho avy.
Raha afaka manampy zavatra manokana amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny orinasa izahay. Ilaina tokoa ny milaza aminao fa tsy asa mora ny asan'ny mpitrandraka mpivarotra sy fananganana. Mazava ho azy, tonga eto ny herim-po sy ny asa eo ambonin'ny herinao. Ny fandefasana ny vavahadin-tserasera na tranokala tianao hotanterahinao matetika dia tsy ankasitrahana.
Saingy aza miady mandrakariva, tsy misy fomba izay tsy hahombiazanao. Niady nandritra ny taona maro izahay niaraka tamin'ny orinasanay tao Dubai ary taorian'ny taona fahatelo dia nahavita nanao lisitry ny tambazotra azo antoka izahay izay nahatonga anay hahazo tombony avy amin'ny Google. Ka ny kely indrindra dia ny mikendry ny telo taona eo ho eo. Tadidio fa ny orinasa dia manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taona ary ity no salan'isa tokony hifantohanao. Eny fa, indrisy, ny fametrahana fotoana lava dia maharitra ela be. Ary dia mitaky vola bebe kokoa izany.
PS ity lahatsoratra ity manana endrika 5,000. Noho ny efa niahiahy anao, dia nahita anay tao amin'ny tranonkala fikarohana ianao. Efa namaky ny lahatsoratra manontolo ve ianao ary nanitikitika ny zavatra nosoratanay? Vao manaporofo fotsiny ianareo fa ny lanjany sy ny kalitaon'ny lanjany dia manan-danja eo amin'ny sehatry ny fikarohana. Ny lohahevitra lalina sy lalina kokoa, ny haingam-piaronao dia napetraka ao amin'ny Google. Arahaba ary miandrandra ny fanamarihanao na antso an-tariby avy aminao. Hanampy anao amin'ny fampivoarana sy fametrahana ny tranokalanao any Polonina na any ivelany isika.
Maro ny antony tokony hitantanana ny tranonkala SEO anao
Androany, efa ho ny 95% ny orinasa no manana tranonkala. Saingy raha ny marina dia ireo tranonkala malaza sy miorina amin'ny Google ihany no mahazo mpividy. Raha ny marina, ny fanaovana tranonkala iray dia tsy hitondra mpividy anao, na ny vokatra tadiavina. Na dia ny tranonkala tsara vita aza amin'izao fotoana izao aza dia tsy manao vola.
Noho izany, ny fametrahana tranonkala dia tsy inona fa fampiroboroboana ny orinasanao an-tserasera.
Raha te-hanangona orinasa iray mahomby sy tena mahasoa ianao, dia tsy maintsy azonao ilay mpanjifany amin'ny teny fototra fotsiny ihany. Fantatsika avy amin'ny traikefa fa mihoatra ny 85% amin'ny doka ao amin'ny antsoina hoe Google AdWords dia tsy mahomby raha toa ka manana orinasa kely. Ny fampandoa-trany azo vidiana amin'ny Google dia tsy ampiasain'ireo orinasa lehibe sy ireo izay efa nipetrahan'ny mpikaroka matetika.
Polonina dia ohatra tsara indrindra amin'ny fampandrosoana ny orinasa eo amin'ny aterineto. Ny isan'ny mpanjifa vaovao mivantana avy amin'i Google dia nihamaro tamin'ny 55% tao anatin'ny dimy taona farany. Mazava ho azy, hatramin'ny 2015, mihamitombo haingana ny paikan'ny fampiroboroboana ny aterineto sy ny magazay amin'ny aterineto. Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa ao amin'ny aterineto dia mitady ny fampahalalana rehetra ilainy momba ny vokatra. Ny polisy dia mividy an-tserasera an-tserasera, ohatra, ao amin'ny Allegro na amin'ny OLX.
Ny bilaogy vaovao Google dia mihamaro hatrany hatrany. Ny lazaina fa mpamaham-bolongana dia mametraka fampahalalana sy famaritana momba ny dia na akanjo. Ny tsenan'ny tsena amin'ny aterineto ihany koa dia mitombo isan-taona isan-taona, indrindra any amin'ireo tanàn-dehibe tahaka an'i Warsaw na Krakow ary i Legionowo.
Inona ny SEO sy Marketing?
Ny fametrahana tranonkala dia mampitombo ny fahitana ny tranokalanao amin'ny milina fikarohana. Avy amin'ny teny anglisy dia fitadiavana motera fikarohana na SEO. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa tsirairay dia manana ny SEO sy ny departemantan'ny marketing. Ny ankamaroan'ny orinasa manamboatra ny marika amin'ny aterineto dia mampitombo ny fahitana ny tranokalany, manangana ny marika, mampitombo ny fahefan'ny sehatra ary mazava ho azy, miezaha manamboatra toerana ao Varsovie araka izay azo atao.
Vantany vao manomboka mametraka ny tranokalanao ianao, dia ampio ny fahitana ny orinasanao ary mahasarika mpanjifa bebe kokoa izay mampiasa ny serivisinao na mividy ny vokatrao any amin'ny fivarotanao an-tserasera. Tsy mila filozofa ianao mahita fa betsaka ny mpanjifa mividy an-tserasera sy fizahana vaovao momba ny orinasa.
Raha ny marina, ny ankamaroan'ny olona mampiasa ny aterineto dia tsy afaka mijery ireo tranokala sy trano fivarotana izay manolotra vokatra mitovy amin'izany amin'ny orinasanao.
Mihoatra ny 85% ny olona miditra ny toerana ambony 5 ao amin'ny Google. Na dia izao tontolo izao mahatsikaiky momba ny varotra aza, raha te hanafina ny faty ianao dia ataovy amin'ny lafiny hafa amin'ny Google.
Antony vitsivitsy tokony hapetrakao avo amin'ny Google ny tranonkalanao?
Mitombo ny tombony
Kely kokoa ny mpanjifa
Ampitomboy ny tanjon'ny orinasanao
Mpividy iray niverina avy amin'ny motera fikarohana amin'ny Internet
Afaka mampahatsiahy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka mailaka
Reducing expanses for service service in the company
Amin'izao fotoana izao, mihamitombo ny fironana amin'ny fijerena ny fivarotana sy ny fividianana amin'ny aterineto. Indrindra indrindra fa ny tanora, eny fa na dia ny zandriko lahy, dia vao haingana tany amin'ny trano fitaovana RTV fivarotana. Nijery ny vokatra nanamarina ny fanombanana tao amin'ny aterineto izy ary niverina niverina nividy ity vokatra ity tao amin'ny aterineto. Fomba entina hentitra satria ny ankamaroan'ny orinasa dia mampiseho ny vokatra ao amin'ny magazay ho lafo vidy satria tsy maintsy ampiharina amin'ny marika izy ireo. Ao amin'ny Internet Mazava ho azy, afaka manao fihenam-bidy kely kokoa ry zareo any.
Ahoana ny fomba hanombohana ny fametrahana tranonkala tsara?
Noho izany hanombohana ny fametrahana ny tranokalanao tsara, tsy maintsy manomboka amin'ny scratch ianao. Jereo ny fomba fijerin'ny tranonkala sy ny haingam-pandeha eto amin'ity pejy ity ary na tsy nisy olona nandrava ny fametrahana sy nanao ny antsoina hoe rohy spam.
Ilainao koa ny mijery ny marika amin'ny milina fikarohana raha marina ny adiresy ary na ny orinasa tianao hapetraka ary ny orinasanao manokana dia manana hevitra tsara. Maro ny antony mahatonga ny toerana hipoitra amin'ny valiny na ambany.
Raha ny marina, ny fotoana misy ankehitriny dia mitaky vahaolana tsy voafetra. Amin'izao fotoana izao, ny SEO rehetra dia miankina amin'ny algorithm Google miovaova. Mazava ho azy, ny rafitra ampiasain'io orinasa io dia 100% miafina. Noho izany, ireo manam-pahaizana telo amin'ny fametrahana tranonkala dia tsy mieritreritra ny asa ataony.
Tsy ireo manam-pahaizana manokana izay miara-miasa amin'ny mpanjifa dia manana toerana tsara indrindra eo an-toerana izay hita amin'ny tranokalan'ny google, toy ny Google na karatra Google na Google Maps.
Ny manampahaizana manokana tsirairay dia manasaraka ny fametrahana ny tranonkala ho lazaina ho antony roa lehibe.
Ny fametrahana tranonkala dia ny fanatsarana ny tranonkala anatiny. Fanatsarana ny pejin-drakitra sy ny fanamarinana ny haingan'ny pejy.
Ary ny fametrahana pejy ekena, izany hoe mampiditra rohy anaty sy mampiroborobo ny vokatra ao amin'ny tranokala hafa.
Nahoana no mifidy ny orinasa?
Ny orinasa momba ny varotra dia avy any Dubai sy Londres. Nandamina sy nandamina tranonkala tany ivelany izahay. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia manampy ireo mpandraharaha avy any Polonina hanangana tranokalan'ny faritra, ohatra any Warsaw, Krakow ary tanàna kely toy ny Radzimin.
SEO - Call ME androany ary mandamina fahalalahana Marketing notsongaina!
Website positioning ary marika ao Abu Dhabi
- Famaritana vaovao momba ny fomba hampiroboroboana ny orinasanao an-tserasera!
Raha mitady orinasa iray izay hanampy anao hametraka ny tranokalanao any Emirates ianao. Manasa anareo amim-pitiavana izahay mba hiara-miasa amin'ny fikambanana. Manana traikefa taona maro izahay amin'ny fametrahana tranonkala ao amin'ny Google.
Amin'izao vanim-potoana izao, ny toeran'ireo tranonkala dia, indrisy, asa sarotra ary noho izany dia mitaky fiaraha-miasa amin'ny olona mahalala zato isan-jato ny zavatra tena tokony hatao mba hahazoana antoka fa manana toerana ambony ao amin'ny milina fikarohana ny tranokala.
Momba ny raharahan'ny aterineto amin'ny Abu Dhabi?
Tena tanàna manokana i Abu Dhabi rehefa miditra amin'ny orinasan-tserasera. Abu Dhabi amin'ny ankapobeny dia teboka any atsinanan'ny UAE. Any akaikin'ny renivohitr'i Dubai Voivodeship no ny afovoan-draharahan'ny asa an-dranomasina fanamafisana ao Emirates.
109 ny isan'ny tanàna lehibe indrindra ao UAE ary ny faharoa any UAE, mihoatra ny 340,000 mponina ao 2018 no nisoratra anarana tao amin'ny birao. Rehefa jerena ihany koa ny antontan'isa fisoratana anarana dia mendrika ny mampiasa vola amin'ny orinasam-pifandraisana amin'ny Internet any Abu Dhabi.
Maro ireo olona amin'izao fotoana izao no mitady vohikala sy vokatra maro ao amin'ny aterineto. Raha mitady ny tranokalanao koa ianao amin'ny toerana voalohany amin'ny tranokalam-pifaneraserana voalohany, dia tokony ho zatra amin'ny tenin'ity tranonkala ity ianao.
Abu Dhabi dia iray amin'ireo tanàna tena tianay ary avy any izahay dia manana mpanjifa vitsivitsy izay mametraka tranokala any UAE.
I Abu Dhabi dia malaza amin'ny maha mpianatra tanàna azy, ka ny tranonkala SEO any Abu Dhabi dia mila mahatsiaro. Manomboka ny fandraharahana mandritra ny taona akademika ary eto no fotoana mafana indrindra izay ahitana ny tanàna feno ny mpianatra sy ny fiainana ao amin'ny trano fisakafoanana.
Ny volana sisa any Abu Dhabi dia efa volana maromaro ny fahavaratra ary afaka miteny amim-pahasahiana ianao na afaka mahazo tombony amin'ny sehatry ny fizaran-taona. Amin'ity raharaham-barotra iray any Abu Dhabi ity dia ny tahan'ny fidiram-bola midadasika.
Abu Dhabi dia tanàn-dehibe amin'ny fampiasam-bola madinika sy madinika. Ary, ny fampiasam-bola lehibe kokoa eto dia tsy miditra an-tsehatra na dia eo amin'ny fandraharahana an-tserasera aza. Azonao atao ihany koa ny mipetraka sy ny mividy any Google.
Raha ny momba ny tranokalan'ny fipetrahana eo amin'ny tsena eo an-toerana. Indrisy anefa fa ny rafitra fanehoana ny mpanjifa sy ny tompon'ny orinasa dia miorina eto. Eto ambany eto dia hahita orinasa vitsivitsy izay hiarahantsika miasa amin'ny Emirates ary hametraka ny tranokalany.
Tahaka ny voalohany tany Abou Dhabi mba hampiseho aminao fa efa miasa ao amin'ny tsenam-barotra ao an-toerana isika, haka barazy miaraka amin'ny sandwiches kebab sy ny trano fisakafoanana any an-toerana ho an'ny mpianatra.
Efa an-taonany maro izahay no nanao tranonkala SEO sy Marketing ary faly ny ankamaroan'ny mpanjifanay.
SEO any Abu Dhabi - Miantsoa androany ary mandamina fepetra maimaim-poana!
tranokalan'ny fampielezana fandaharana maimaimpoana
Mikarakara an'i John West izy io
SEO amin'ireo tanàna kely kokoa ao amin'ny UAE sy Pejy eo an-toerana. Miarahaba ny mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny tranokala kely kokoa. Mametraka pejy ao Emirates ny pejinay. Nanampy orinasa kely an-jatony izay miasa ao amin'ny Faritra Golfa izahay.
Ny kely kokoa ampahan'ny tanànan'ny Emirates dia tanàna malaza dia fantatrao, inona no tena izy tanàna tsara misy any Emirates ao amin'ny Fanjakan'ny Golfa.
Fianakaviana ao amin'ny distrikan'i Dubai, izay ahitana orinasa mahafinaritra maro izay ahafahanao manomboka miara-miasa. Ary mpanjifa izay azonao omena ny tolotrasa na ny serivisinao.
Ny tanàna kely any akaikin'i Dubai sy Abu Dhabi dia ny 25 km fotsiny miala amin'ny afovoan'i Dubai. Azo antoka fa mpanjifa manankarena izay ahafahanao mivarotra ny vokatrao.
Amin'izany fotoana izany ny tsirairay dia manana internet any Dubai. Efa nanontany tena ianao matetika ny fomba hatao raha te ho saika manerana ny tanàna iray ao anatin'ny iray andro. Eny, ny valiny dia ny marketing amin'ny Internet tsotra. Afaka manampy anao ny orinasanay ary afaka mampiroborobo ny orinasanao any amin'ireo tanàna kely kokoa any Emirates.
Mametraka ny tranonkalanao any ambanivohitr'i Dubai izahay!
Nampiroborobo sy nametraka orinasa an-jatony izahay tany Londres, London, Brussel. Any Emirates dia misy mponina 15,000 mihoatra, misy tanàna 24,000 kilometatra toradroa ny tanàna. Ary koa, ny fahaizana mivarotra ny vokatrao sy ny toeranao amin'ny orinasan-tserasera dia tena tsara.
Sarobidy amin'ny tranokala ve izany? Emirates?
Noho izany dia ny salanisan-taona aty amin'ity toerana ity izay azonao atrehina amin'ny aterineto dia eo anelanelan'ny 20 sy 65 taona. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny olona dia mbola miasa na manana fidiram-bola. Tena zava-dehibe izany raha ny fampiroboroboana ny vokatrao amin'ny aterineto. Satria tsara indrindra ny hivarotra vokatra ao amin'ny Internet ho an'ireo olona tena manana vola ary afaka mandany azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny olona amin'izao vanim-potoana any Emirates izao dia azo ampiasaina amin'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook. Afaka manampy anao hahazo mpanjifa mihoatra noho ny 10,000 ianao amin'ny iray andro.
Ka raha te hampiroborobo ny orinasanao ianao Ny UAE na na any Golfa aza. Ny orinasanay dia manolotra toerana mombamomba ny tranonkala any Dubai sy ny faritra manodidina. Ny toerana misy an'i Dubai sy ny pejy Abu Dhabi dia mety ho antsika ao amin'ny Google !.
Ny orinasanay dia nahomby tamin'ny fiaraha-miasa ary mbola miara-miasa amin'ny orinasa iraisam-pirenena sy orinasa mpandraharaha ao amin'ny varotra. Ary orinasa miasa ao Afovoany Atsinanana. Ankoatr'ireo zavatra hafa, nanampy mpivarotra an-tserasera sy orinasa izahay izay nila nanatona haingana ny mpanjifa. Mazava ho azy fa mitaky mihoatra noho ny 6 volana hatramin'ny herintaona eo ho eo ny fametrahana tranonkala.
Ny varotra misy ny mpandraharaha eo an-toerana, ny mpanjifanao izay aorian'ny asa dia mikaroka vokatra amin'ny Internet. Hanolotra anao ny zava-drehetra izahay amin'ny fampielezan-kevitry ny marketing iray izay hanomanantsika manokana anao. Ny solontenan'ny orinasanay dia ho tonga any amin'ny biraonao na tranonao hiresaka momba izay hanombohanao hampiroboroboana amin'ny Internet. Ny orinasantsika dia tena manampy amin'ny fo am-pahatsorana. Te hanampy ny mpanjifanay izahay. Ny ekipanay HR dia tsy mitady olona hamitaka azy ireo.
Te-hanampy ny mpanjifanay izahay any Emirates
Ny orinasam-pifandraisana Dubai City dia te hanampy anao hanao ny fanatrehanao eny an-tsena eo an-toerana. Ankoatr'izay, manana fitaovana hanaovana izany isika, fantatsika ny fomba hanampiana anao hahazo vola fanampiny ary hananganana orinasan-tsoavaly eo an-tsena eo an-toerana akaikin'i Dubai Mazava ho azy, raha tianao, ampahafantarinay aminao ny drafi-fiaraha-miasa ary ny laharan'ny tranokala eo amin'ny tsenan'ny UAE. Avy any Dubai, dia 25 km ihany no mankany afovoan-tanàna. Ka raha manana vokatra na serivisy tsara ianao dia halainao ny minitra 20 vao tonga ao afovoan-tanàna. Noho izany dia afaka manampy anao izahay hanangana orin'asa eo an-toerana sy mifindra any amin'ny faritry ny Golfa amin'ny vokatra na serivisinao mahafinaritra.
Manantena izahay fa hanome anao vintana izahay ary hametraka ny tranokalanao ao amin'ny UAE. Raha tianao, azonao atao koa ny mamaky fanazavana bebe kokoa momba ny fampiroboroboana ny Internet sy ny Internet, ohatra ao amin'ny Instagram.
Rehefa avy namaky lahatsoratra sasantsasany izahay dia hahatsapa fa tena manana hevitra momba ny zavatra ataonay amin'ny zana-tsokosoko sy mailaka mailaka izahay. Mazava ho azy fa ny tranonkala fitadiavana no asanay voalohany. Saingy isika dia hanao izay tsara indrindra vitantsika mba hanamarika ny orinasanao amin'ny karatry ny fandraharahana Google ary hanatsara ny tranonkalanao mba hitadiavan'ireo mpanjifanao any amin'ny orinasa ary hahita anao aloha.
Mifototra amin'ny SEO ao Dubai
Noho izany, ny fisoratana anarana any UAE - Azo atao izany ary misy ny fotoana mety hahatongavanao ao amin'ny Top 10 Google raha omena làlana ianao amin'ny manaraka amin'ity taona ity. Ny fifaninanana ao Dubai sy Abu Dhabi dia mitombo hatrany. Indrisy anefa fa ny internet marketing dia miasa raha toa ka misy olona mitsambikina mankany amin'ny toerana voalohany 3 voalohany amin'ny motera fikarohana ary hanomboka hanome valiny mahafa-po ny mpanjifa.
Tena sarotra tokoa ny manangana orinasa vaovao indray amin'ity toerana ity. Ankoatra izany dia tokony hieritreritra ny hiasa amin'ny orinasa iray izay manohana sy mampiroborobo ny vokatra an-tserasera.
Manantena izahay fa hifandray aminay ianao, dia manantena ny fiantsoana anao. Hitanao ianao ao amin'ny tanàna mahafinaritra an'i Radzymin, Mirary soa anao ary fahombiazana bebe kokoa amin'ny fananganana orinasa akaikin'i Dubai.
Ahoana ny fomba ahazoana mpanaraka amin'ny instagram?
Ahoana ny fomba ahazoana mpanaraka amin'ny instagram? - Manàna na tsy eto ny fanontaniana. Amin'izao androntsika izao, ny tranonkala fifaneraserana dia iray amin'ireo endrika fifandraisana indrindra eo amin'ny tanora. Instagram no iray amin'ireo mpampiasa indrindra mpikirakira ny sehatra amin'ny resaka dokambarotra mivantana amin'ny aterineto.
Instagram dia tsy sehatra mahazatra izay hanampy anao amin'ny fametrahana ny tranokala na amin'ny SEO. Fa azo antoka fa hahazo mpanaraka marobe kokoa hampitombo ny fahatsiarovanao ny marika ary hanatsara ny fahatsiarovan'ny Internet Brand.
Ny fomba hitadiavana mpanaraka amin'ny instagram - Marketing Automation avy ao Dubai City Company
Instagram dia an'ny taranaka Y, na ho an'ireo teraka tao amin'ny 80s tamin'ny taonjato faha-20. Efa taranaka Millennium izao isika, ilay antsoina hoe taranaka digitale. Noho izany dia mila fantsona ara-barotra maoderina tokoa ny fahazoana an'io karazana mpihaino io.
Noho ny fampiroboroboana ny vokatrao sy ny serivisy ao amin'ny fantsona Instagrama, afaka mahazo mpanjifa maro sy mpiantoka maro izahay. Ity sehatra marketing, na dia eo aza ny fisehoan-javatra, dia tsy natao ho an'ireo zatovovavy ihany izay mampiroborobo ny toetrany. Na izany aza, indraindray dia sarotra ny miditra sy mijery mba hampitahana azy io.
Ny vokatra avy amin'ny tompon'andraikitra sy ny serivisy hafa!
Ka aiza no hanomboka hahazo ny Instagram mahazo ny mpanjifa vaovao. Ny fomba tsotra indrindra dia ny manomboka amin'ny famoronana kaonty eto amin'ity sehatra sosialy ity.
Ahoana no ahazoana mpanaraka amin'ny instagram - Atombohy amin'ny Instagram - Company Company Dubai
Izany fahalianana izany alohan'ny hanombohantsika hianatra ny fomba hahazoana mpanaraka amin'ny Instagram. Ity tranonkala ity dia efa natsangan'ny Facebook nandritra ny taona maro. Ka raha manome dokam-barotra amin'ny Facebook avy amin'ny milina ianao dia afaka manamarina fa miseho ihany koa ao amin'ny Instagram. Fantatsika avy amin'ny traikefa fa tena misy dikany izany ary olona maro no miditra amin'ny Instagrama mandritra ny fampielezan-kevitra. Fanampiny mahafinaritra ho an'ny dokambarotra ao amin'ny Facebook izany. Izany fomba izany no ahafahantsika mahazo mpanjifa marobe.
Inona no Instagram?
Noho izany dia tambajotra sosialy tena malaza izay ahitana mpampiasa an-tapitrisany maro avy any Amerika sy Asia mamoaka ny sarin'izy ireo sy ny lahatsary momba lohahevitra tena samihafa.
Instagram dia noforonina tao amin'ny 2010 ary nanomboka ny asany ho toy ny apple apple. Instagram haingana dia nitombo tao amin'ny aterineto. Avy amin'ny fampiharana kely amin'ny 2 taona ary nanao tambajotra sosialy azo ampitahaina amin'ny orinasa nomerika.
Ho an'ny latsaky ny 3 taona, ity fampiharana ity dia nosedraina tany amin'ny firenena maro, indrindra fa tany Amerika Afovoany hatrany am-piandohana. Instagram dia noraisin'ny Facebook ho an'ny volavolan-dalàna goavana iray eo amin'ny iray lavitrisa dolara.
Ny tena antony nahatonga ity sehatra ity ho lasa malaza dia tena nahatalanjona tokoa. Mazava ho azy, ity orinasa ity dia tsy voalohany ho an'ny orinasa marobe maro izay efa nanolotra tolotra mitovy amin'izany tamin'io fotoana io. Na izany aza, Instagram dia nanatsara ny fampidirana ny sariny ary ny fahafahana mampihetsika ny efijery amin'ny dingana haingana kokoa noho ny fifaninanana. Ary nanapa-kevitra tanteraka ny antony nahatonga ity sehatra ity ho iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny fampiharan-dokambarotra Facebook.
Instagram koa dia nampifangaro mora ny fahafahana mampiditra sary avy amin'ny finday mankany amin'ny fampiharana. Taorian'ny enim-bolana teo am-piandohan'ny fampiharana, efa nahazo mpikiraha an-tapitrisany vitsivitsy ny orinasa. Nanaiky haingana ny Instagram ary nanampy ny fampiharana azy. Ny fahafahana haka sary haingana.
Ilaina ve ny manomboka ny fivarotana amin'ny Instagram ao Dubai?
Instagram dia sehatra ara-barotra manokana. Mifantoka amin'ny vondrona sosialy izay mifandraika amin'ny lamaody, ny fitsangatsanganana ary ny fanompoana isan-karazany ho an'ny vehivavy. Raha ny momba ny lehilahy no voakasik'izany, dia mazava ho azy, ny tranga maromaro amin'ireo orinasa izay mampiroborobo ny tolotr'ireo mpiserasera amin'ny vondrona lahy. Saingy soso-kevitra tsy dia fahita firy izy ireny.
Ahoana no ahazoana mpanaraka amin'ny instagram - 100% Marketing Automation! - Company Company Dubai
Instagram dia milaza amintsika mazava tsara fa ny ampahatelon'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa eo amin'ity sehatra ity dia lehibe kokoa noho ny amin'ny tambajotra sosialy hafa, ohatra twitter. Indrindra fa ireo vehivavy mipetraka ao amin'ny Instagram dia mitadiava akanjo marobe alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra.
Nahoana no mendrika ny manomboka amin'ny sehatra Instagram? Hevero fa ny fandraisana anjara amin'ny mpampiasa Instagrama dia ambony lavitra noho ny ao amin'ny Facebook na Twitter. Ary ny zava-misy fa ny Instagram amin'ny 2018 dia nahitana mpitsikera maherin'ny 3 miliara dia nilaza tamintsika fa ny olona fahatelo eto an-tany dia mampiasa io tranonkala io matetika.
Ahoana àry no hanombohana mpanaraka?
1. Fenoy ny mombamomba anao ao amin'ny Instagram
Eo am-piandohana dia tokony handinika ny tanjona manokana hanokafana kaonty Instagram ianao. Satria amin'ity sehatra ity ianao dia afaka mifidy eo amin'ny kaonty manokana na kaonty orinasa. Noho izany raha mifidy kaonty orinasa ianao, indrisy, tsy maintsy mampifandray azy ireo amin'ny kaontinao Facebook ianao. Izany dia manana tombony satria manome fahafahana anao hameno ny angona fototrao manokana sy hamela anao hisafidy ny indostrianao izay hampahafantarana anao.
Ny mombamomba an'i Instagram ao amin'ny orinasa dia manome fahafahana miditra amin'ny antontan'isa ary ahafahanao manangana dokambarotra manohana anao. Koa amin'ny voalohany ianao dia tokony hifidy sarimihetsika sarimihetsika na sarimihetsika mombamomba anao mba hahafahan'ireo mpampiasa hafa tsindrio eo amin'ny mombamomba anao. Na ahoana na ahoana, ny sary dia tokony hifandray amin'ny orinasa na ny orinasa.
Ny zavatra manaraka dia manampy zavatra hendry amin'ny orinasa an-tserasera an-tserasera na ny famaritana ny orinasa. Andramo tsy handikana lahatsoratra amin'ny tranokala hafa na tranokala hafa. Satria ny fitaovam-pikarohana anaty aterineto amin'izao fotoana izao dia manana antsoina hoe sivana spam. Ireo sivana ireo dia mikaroka ny lahatsoratra nosoratana tamin'ny tranonkala hafa ary mampihena azy ireo automaty ny laharan'ny pejy ao amin'ny Instagram.
Zava-dehibe ny hanoratanao amin'ny tranokala lehibe ny tranonkalanao. Ary ny anaran'ny orinasa dia nijery ny tsy marim-pototra. Eny ary, raha tsy te-hampiroborobo ny marika ianao dia afaka manatsara izany amin'ny fomba izay hanamarihan'ny olona izay mitady anao amin'ny Instagram ny anaran'ny orinasa na ny marikao. Tsarovy fa ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny fampiroboroboana ny tambajotra sosialy dia ny orinasanao na ny anaranao ho mendri-pahatsiarovana sy mora tadidy.
Zavatra iray tena manan-danja. Instagram nanampy ny mety hisian'ny antsoina hoe tenifototra. Izany hoe, ireo teny fitenenana antsoina hoe picket izay mitady ny mpampiasa Instagram amin'ny fampidirana ireo fampahalalana momba ity lohahevitra ity ho an'ny profil. Ohatra, ny orinasanay dia mampiasa: #DubaiCityCompany
Ahoana no ahazoana mpanaraka amin'ny instagram - Marketing Automation! - Company Company Dubai
2. Manomboka mampiroborobo ny mombamomba anao
Amin'ny voalohany, manome soso-kevitra izahay fa ho azonao antoka fa ireo olona efa nianatra tamin'ny Instagram dia nahafantatra fa nanokatra kaonty ianao ary ny antsoina. Fomba iray fanampiny hampahafantarana ny olona rehetra izay niarahanao niaraka tamin'ny fantsona vao haingana ny kaonty Instagram vaovao anao.
Mampiditra lahatsoratra fohy ao amin'ny Facebook, twitter, linkedin, goldenLine. Mazava ho azy, aza manantena zavatra mahavariana mahagaga sy tampoka olona roa arivo izay hanaraka ny mombamomba anao.
Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny 40% izay anananao ao amin'ny Facebook dia mety efa manana kaonty Instagram. Raha fantatrao fa ny Facebook Instagram dia mifamatotra, ka azo antoka fa ny fifanakalozam-baovao. Koa ny olona izay manaraka ny mombamomba anao ao amin'ny Facebook dia hampahafantarina amin'ny solosaina fa manana kaonty Instagram koa ianao. Noho izany dia tokony hieritreritra momba ny lahatsoratra vitsivitsy ao amin'ny pejin'ny Facebook ianao.
3. Ambarao ny fitaovam-pambolena amin'ny Instagram
Ka manampy ahy amin'ny fanontaniana toy ny hoe Ahoana no ahazoako mpanaraka amin'ny Instagram?
Raha ny momba ny sary sy ny gazetin'ny fampahalalam-baovao dia misy tetika tsara sy ny fampiharana tsy tapaka ataony dia ampiharina tsy tapaka amin'ny Instagram. Ary ny fanoloran-tena manontolo amin'ny fotoanao dia azo antoka fa handoa ny fahombiazan'ny mombamomba anao ary ny fahazoana mpanjohy vaovao maro.
Ny zavatra manan-danja indrindra tokony hifantohanao eto dia ny hatsaran'ny sary sy ny kalitaon'ny sarimihetsika izay havoakanao. Ohatra, lahatsary izay manana kalitao HD dia mihoatra ny 50% matetika amin'ny instagram sy Facebook. Ankoatra izany, ny kalitaon'ny fitaovana fampiroboroboana anao dia tokony ho eo amin'ny ambaratonga avo indrindra satria ireo orinasa hafa dia manome fotsiny ny zava-drehetra ao amin'ny HD ihany.
Ny tena manan-danja indrindra amin'ny tetikasam-barotra amin'ny Instagram dia:
Mizara orinasa fa tsy sary. Ireo mpampiasa Instagram dia mora kokoa ny mamaly amin'ny sarimihetsika noho ny sary. Amin'izao androntsika izao, ny algorithm Instagram sy Facebook dia nanova ny rafitra mba hahafahan'ireo horonantsary hampirisihana matetika kokoa. Izany dia vokatry ny toekarena mpamokatra madio. Ny horonantsary dia maka ny 200-300 MB ary ny olona izay mijery horonantsary hafa dia voatsindry imbetsaka. Noho izany, rehefa afaka fotoana fohy dia horaketina ilay sarimihetsika. Mampalahelo fa tsy maintsy miteny malalaka ianao, tsy malaza amin'ny Instagram toy ny orinasa izy ireo.
Misafidiana sary avo lenta fotsiny! Raha mankany amin'ny top 10 sarimihetsika ao amin'ny Instagram ianao. Ho hitanao tsy ho ela fa ny ankamaroan'ireo orinasa ireo dia mamoaka sary tsy dia tsara loatra, izay marihina, mazava ho azy, araka ny filazan'izy ireo. Raha manomboka mamoaka sary izay tena kalita madinidinika ianao na kalitao ambany. Azo antoka fa hanomboka handao ny mombamomba anao ny olona.
Famoahana sary Ny lalao malaky manaraka dia ny famoahana sary avy amin'ny sivana. Ny ankamaroan'ny filazam-baovao Instagram dia afaka manatsara ny loko ary manampy vokatra mahaliana. Indrindra indrindra amin'ny finday, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa ny filalaovana Mayfair. Na izany aza, raha mahasoa amin'ny famoahana sary ianao, dia tena mahavariana tokoa ny vokany. Afaka manampy anao aho hahazo mpanaraka bebe kokoa.
Ampiasao ny tenifototra isaky ny sary. Ny habetsaham-be azonao ampiana dia ny 30 hashtas. Raha te hahita ny iray amin'ny asa tianao hampiasa ireo mpampiasa Instagram hafa mba hitady anao, dia manoro hevitra anao ny webstagram. Ity dia tranonkala tsotra izay ahafahanao misafidy ny tenifototra malaza indrindra. Ary noho izany, misafidy ny malaza indrindra sy mazava ho azy isaky ny lahatsoratra izay hampidirinao ao amin'ny Instagram hampiasa ny tenifototra tianao indrindra.
Ahoana no ahazoana mpanaraka amin'ny instagram - Webstagram Creating Marketing Hasztags!
Afao sary 24 ora isan'andro. Amin'izao fotoana izao, manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao mamoaka sary sy lahatsary ao Instagram mazàna 24 ora isan'andro. Noho izany dia tsotra ny valiny, tsy maintsy manomboka mampiasa programa marketing ianao izay manampy anao hanamboatra ny varotra.
4. Ampiasao ireo programa manaparitaka ny fivarotana
Ny programan'ny automation Tailwind indrindra. Ny orinasanay dia nahomby tamin'ny fampiharana ity fampiharana ity mba hampitombo ny isan'ireo mpanaraka ao amin'ny Instagram. Mazava ho azy fa teo am-piandohana dia nampiasanay takelaka marika manan-tantara. Saingy aorian'ny telo herinandro latsak'izay dia hitanay fa ny fametrahana lahatsoratra dia tokony ho adiny roa isaky ny adiny roa no manana mpanaraka marobe amin'ny indostria.
How to get followers on instagram - Tailwind Marketing Automation!
Ity programa ity dia ahafahanao mametraka lahatsoratra be dia be. Izay tsy misy ny hizarana anao dia alefa amin'ny Instagrama raha mbola natory, ohatra ianao. Noho izany ny orinasanay dia nanomboka tamin'ny fehiloha tamin'ny fampiasana ity programa ity sy ny programa buffer. Nampitombo ny isan'ny mpanaraka anay tao amin'ny Instagram ny 5,000. Amin'izao fotoana izao, manana Instagram lehibe indrindra amin'ny indostria izahay, noho izany dia tsy manisy fironana be loatra amin'ny fampivoarana ity sehatra marketing ity izahay.
Ahoana ny fomba ahazoana mpanaraka amin'ny instagram - Buffer Marketing Automation!
5. Fanamarihana sy fampahalalana
Matetika ireo olona efa manana kaonty no mitady sehatra interactif. Amin'izao fotoana izao, ny asanao dia hanampy azy ireo hampiroborobo ny raharahany manokana. Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny fametrahana fanamarihana na fampahalalana fohy mikasika ny vokany. Misaotra anao nandefa sary na nampiditra vaovao izay tianao.
Ny ankamaroan'ny olona manontany tena ny fanontaniana mitovy Ahoana no ahazoanao Instagram manaraka followers? Ary ampio ny olon-kafa hanampy anao. Amin'ny fampidirana fanehoan-kevitra mampahafantatra ireo mpampiasa hafa izay tianao ihany koa, azonao atao koa ny manampy ny fampahalalana manaraka ny mombamomba ahy na Hey Jereo koa ny sary. Ny 80% ny mpampiasa dia hanaraka ny mombamomba anao, mazava ho azy, satria ianao dia haneho hevitra am-pahibemaso ao amin'ny vohikalany sy ny orinasany. Fantatsika avy amin'ny traikefa fa tena miasa izy satria ny toetra maha-olombelona antsika dia natsangana.
Ary andeha ho marin-toetra fa ny media sosialy dia ny mamorona fifanakalozan-kevitra eo amin'ny olona. Amin'ny ankapobeny, io no fiheverana an'io raharaham-barotra io araka ny nieritreretany momba ny 15 taona lasa izay. Io olona io dia mifandray amin'ny olona haingana kokoa.
Ary niara-niasa tamin'ny aterineto izy tsy hoe niaina fotsiny. Ny fomba tsotra indrindra dia ny mahita olona eo an-toerana. Ohatra, raha mikasa ny hampiroborobo ny raharaham-barotra any Warsaw ianao.
6. Diniho ny angona momba ny varotra
Ny fanaovana dokam-barotra momba ny varotra amin'ny fametrahana ny mombamomba anao koa dia singa tena manan-danja.
Manana na tsy eto ny fanontaniana? Tadiavo ny angon-drakitra na tsy halefa ny data
Ahoana ny fomba ahazoana mpanaraka amin'ny instagram amin'ny fanamarinana ny angona momba ny varotra.
Ny fomba tsotra indrindra hijerena ny angona sy ny fikarakarana ny angon-drakitra dia mazava ho azy fa mampiasa ny programa Tailwind. Ny zavatra manaraka hatao dia ny mijery ny Google Analytics. Ilaina ny miditra indraindray ary mahita olona maro miditra ao amin'ny Instagrama, indrindra rehefa manangana hetsika ara-barotra ao amin'ny Facebook ianao.
7. Marka mpampiasa malaza
Ny fampidirana sy fametahana, na ny fampielezana azy aza, dia mampitombo ny fahafaha-manatratra ny mpampiasa eo an-toerana. Ohatra, raha mipetraka akaik akaikan'i Warsaw ianao ary te hanitatra ny orinasa any an-tanànan'i Legionowo. Manoro hevitra ny hitady ny tanànan'i Dubai na ny filohan'ny tanànan'i Dubai amin'ny Instagram. Toerana manan-kolontsaina sy fanatanjahan-tena manan-danja.
Famaritana ho an'ireo mpampiasa malaza ao amin'ny Instagram. Mety miteraka ny zava-misy ireny olona ireny ka tsindriana eo amin'ny sary eo amin'ny sarinao na mila ny sarinao amin'ny olona efa miaina ao amin'ny toerana misy anao. Mazava ho azy fa hanampy anao hampitombo ny isan'ny olona mahita ny bokinao amin'ny Instagram ihany koa fa manampy anao koa hahita olona mifandray amin'ny lohahevitra tadiavinao.
Ka ahoana no ahazoanao mpanaraka amin'ny instagram ao anatin'ny fotoana fohy ao amin'ny efitranonao? Jereo, mazava ho azy, ho an'ny VIPs, olona mifandray amin'ny fahitalavitra na dokam-barotra. Tag ary ampio ny fampahalalana raha toa ka mamaly izany ny iray amin'izy ireo ary mila ny sarinao amin'ny milina ianao dia hahazo olona an-jatony vitsivitsy ao amin'ny mombamomba anao.
8 Ampiasao ny geotargeting amin'ny Instagram
Ampiasao ny geotargeting - tena rafitra tsara izany raha eo amin'ny toerana fametrahana ny orinasa eo an-toerana. Satria raha mitady orinasa te-hiasa ianao na mitady mpanjifa marobe. Manoro hevitra anao izahay, ohatra, hanampiana toerana ho anao ao amin'ny fanentanana ara-barotra Instagram. Raha manao raharaham-barotra any Krakow ianao, dia tsy misy dikany ny mikaroka ireo mpanjifany, hoy izy, Gdansk. Noho izany dia ireo mpifankatia izay avy any ivelan'ny faritra voatondro dia tsy zava-dehibe aminao raha manana orinasa iray izay miasa amin'ny tsena eo an-toerana irery ihany.
Raha te hifindra any UAE manontolo ianao, ampidiro fotsiny ny tanàna ho ohatra #Dubai sy #Abu Dhabi na #Sharja. Ny fandaminana dia eo amin'ny rafitra tena tsara satria maneho ny olona hita ao amin'io faritra io ny orinasanao izay mampiroborobo ny vokatra ho an'ity faritra ity. Tena sarobidy tokoa ny manamarina sy mampiditra ny toerana ahafahanao misafidy izany, ampio sary na lahatsary.
9. Araho ary araho ireo mpivarotra hafa
Ny fomba tsara iray hampiakarana ny isan'ny mpanaraka dia ny fanarahana ireo soritra efa novolavolaina taloha. Ohatra, ilay nanorina ny orinasantsika dia John West izay efa nametraka tranonkala tany Dubai nandritra ny taona maro. Ho fihetsika hendry tokony hanaraka fotsiny ny mombamomba azy ao amin'ny linkin na ao amin'ny Facebook. Jereo ny zavatra ampiasain'ity vahiny ity ary ny fomba ampiany.
Amin'ny lafiny ara-teknika, mazava ho azy dia ara-dalàna ny 100% ary tsy mitaky fampiasam-bola avy aminao. Ny olona manaraka dia hanoro anao izahay dia mazava ho azy John West. Mazava ho azy fa ny fitomboan'ny hacker avy any Amerika. Mahomby ihany koa raha mihaino kely ary mamaky momba ny varotra ary ho hainao koa ny fomba hamakafakana ireo data rehetra sy ny fomba hananganana marika matanjaka amin'ny Internet.
Minoa anay, maro amin'ireo olona malaza ireo no ao amin'ny tranonkala. Niezaka ihany koa ny hianatra ny fomba hahazoana mpanaraka amin'ny instagram amin'ny fanamarinana ny hafa. Mankanesa ao amin'ny mombamomba azy ireo isan-andro momba ny varotra ara-barotra ary ampiasao fotsiny ireo rafitra ireo ao amin'ny vohikalany sy ny mombamomba azy ireo.
10. Fanitsiana ny fanatsarana ny mombamomba ny Instagram
Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny fihetsika. Ny systematicity no fanalahidin'ny fahombiazana. Ny fampiharana ny rafitra vaovao sy ny fampidirana ireo fantsom-baovao vaovao dia tena ilaina tokoa. Ny fampiroboroboana ao amin'ny Facebook mampiditra lahatsoratra amin'ny linkedin dia ny ilainao mba hampifangaroana manontolo. Fotoana izao hanampiana ny fampahalalam-baovao isanandro mba hamelàna ireo fitaovan'ny fikarohana hahatakatra izay tianao holazainy.
Mitaky fotoana betsaka ny fampiroboroboana ny vokatrao amin'ny media sosialy. Noho izany, ankoatra ny automation indraindray dia sarotra ny miditra amin'ny famakiana momba ny vokatra vaovao ao amin'ny orinasa. Mivezivezy isan'andro isan'andro ny fivarotana, izay efa nahomby 6 volana lasa izay ary mety ho tsy mahomby tanteraka.
Manandramana mandrakariva ny manontany tena raha ny tena manan-danja indrindra dia ny fomba hahazoana mpanaraka amin'ny instagram. Ahoana no hahazoanao vola amin'iny?
Mba hamintinana ny fomba hahazoana mpanaraka amin'ny instagram?
Indrisy, mba hahazoana olona marobe izay manaraka ny mombamomba anao. Tsy maintsy manana sarimihetsika mafana sy horonantsary miasa ao YouTube ianao. Fomba tena tsara koa ny mampiroborobo ny mombamomba anao amin'ny alalan'ny horonan-tsary hafa, toy ny metacafe sy pintere.
Ny fampiasana ny teknika sy ny toro-hevitra lalina dia ahafahanao hahazo mpanjohy marobe maro tsy amin'ny Instagram, fa ao amin'ny Facebook ihany koa. Indrisy anefa fa tsy azo tratrarina izany amin'ny asa ambany. Tsy maintsy mandinika ny paikadinao momba ny varotra ianao. Satria ny fotoana natokana hanangona vondron'olona mpanaraka sy mpampiasa tafiditra ao amin'ny Instagram dia handray ny ankamaroan'ny fiainanao manokana.
Fintino ihany koa ny fomba ahafahana mpanaraka amin'ny Instagram miezaka ny hahatonga ny mombamomba anao ho feno fanatanjahantena sy dynamique ary tsarovy ny hampiasa ny Instagram anao amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny tambajotra ara-tsosialy hafa, ohatra Facebook sy pinterest. Miezaha hatrany hiresaka sy haneho hevitra momba ny sarin'ireo mpampiasa hafa.
Aza manadino mihitsy ny tenanao amin'ny manaraka ny hafa. Satria Instagram dia manana spammer manakana ny sivana. Noho izany fanarahan'ny olona maro izany dia mety hanakana ny kaontinao ary sarotra be ny miverina.
Afaka manampy anao ve i Eoropa?
Ireo vohikala Varsovia irery ihany avy amin'ny orinasa Dubai City!
SEO mahagaga ao amin'ny tranokalan'i Warsaw irery ihany avy amin'ny orinasa City Dubai!
Ny vohikala Warsaw no ity no tadiavinao? -Ny 50% ny olona manao raharaham-barotra any Varsovia. Ary miasa amin'ny sehatry ny varotra sy ny fivarotana amin'ny aterineto.
Raha ny marina, manontany tena izy hoe ohatrinona ny vidin'ny fandefasana ny tranokalan'ny Google. Fantatry ny rehetra fa orinasa madio i Warsaw.
Tsy mora ny valiny. Arak'izany, rehefa misy tanàna tahaka an'i Warsaw.
Raha ny marina, miankina amin'ny toe-javatra marobe ny vidin-tsolika, tsy misy lisitra sarimihetsika ho an'ny SEO na fametrahana toerana ao an-toerana.
Alohan'ny hanombohan'ny fisaintsainana ny fametrahana ny tranokalantsika na ny fivarotana an-tserasera. Maro ny antony tokony horaisina.
Ny fanendrena an'i Parthenan'i Warsaw miaraka amin'ny orinasan-tanànan'i Dubai
Ohatra, ny orinasa izay tiantsika hapetraka ny orinasa. Avy eo dia ny fifaninana amin'ny sehatra ao amin'ny Google.
Ilainao koa ny manamarina ny valiny amin'ny teny fanalahidy. Mazava ho azy fa ireo izay tiantsika hampiroboroboana ny tranonkala fotsiny ihany.
Tsara ihany koa ny manamarina ny toe-javatra misy ankehitriny sy ny taona maro eny an-tsena.
Avy eo dia tsara kokoa izy io amin'ny resaka fitsipika Google sy ny habetsaky ny votoaty.
Midira ary jereo ny SEO: https://sitechecker.pro/en/
Avy eo: Neil Patel Uber Suggest
Ilaina ny miditra sy mijery an'i Neil Patel Ubersuggest:
Misafidiana ny teninao poloney ary jereo ny hasarobidin'ny toerana misy azy ohatra fiara any Warsaw na, ohatra: tranokala manorina Legionowo
Inona ny vidin'ny fametrahana tranonkala ao Varsovia?
Tsara ny mahafantatra fa, ohatra, ireto fepetra manaraka ireto: Ny fametrahana ny pejy Warsaw no tena be mpitsabo ny manam-pahaizana SEO.
Ka raha toa ka orinasa tena malaza toy ny fiara, clubclubs, hotel na SEO isika. Tsy ny vidin'ny fananganana ao amin'ny Google ihany no ho avo kokoa, fa koa ny fotoana fametrahana ny sehatra.
Tahaka izany koa, raha te-hametraka tranokala any amin'ny tanàna lehibe isika, tahaka an'i Kraków na Łódź.
Ny vidin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny tranokalan-tranonkala dia azo antoka fa hitombo. Noho izany dia handray fotoana bebe kokoa hanampiana ny toerana misy ny tranokalanao ao Bing na Google ianao.
Inona no tokony hotsaroana?
Na izany aza, tokony ho tsaroana fa ny fametrahana tranonkala iray dia dingana iray izay mitondra tombontsoa maharitra sy asa an-katerena dia azo antoka fa hamela ny marika hiorina amin'ny fahatsiarovan'ny mpiserasera sy ny fisiany amin'ny toerana tsara ao Google na dia aorian'ny fampitsaharana ny asa atao aza .
Ohatrinona ny fandaniana antoko politika any Varsovie?
Ny fandaniana fototra amin'ny fametrahana ny orinasa dia ny PLN 350. Tsy dia be loatra ny vidiny raha miresaka momba ny karazana lohahevitra isika: fametrahana pejy Warsaw Centralan na ny Old Town.
Fast Contact us?
Legionowo 05-119, ul. Piaskowa 35 / 25
Ny politikan'ny orinasanay dia ny hampitombo ny fahitana ny tranokalanao ao amin'ny motera google search. Miresaha manokana amin'ny iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra eto Polonina.
Ny SEO na ny fikarohana ara-tsimiao ao Varsovia dia dingana iray izay mitaky fanatanterahana asa atao. Ohatra, tranokalan'ny tranokala. Warsaw no tetikasa mitarika antsika.
Manao fanaraha-maso ny tranonkala mandrakariva izahay. Ohatra amin'ny fanovana ny code HTML. Ary amin'ny maha-fizarana ny sehatry ny fametrahana ny tranonkala, dia miezaka ihany koa ny mamela ireo kaonty sosialy mahomby toy ny Instagram.
Mihoatra ny 90% amin'ny mpanjifantsika dia hahatratra ny kalitaon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fametrahana tranokala any Warsaw.
Satria ny fitsangatsanganana eo amin'ny valin'ny fikarohana dia saika miteraka mpanjifa vaovao avy amin'ny Google foana. Izany, ho setriny, dia midika ho amin'ny fahitana bebe kokoa ny orinasa ao amin'ny Google, Bing, Yahoo ary na Facebook aza. Izany no mahatonga ny mpanjifa midadasika kokoa. Manana tombony toy izany koa izy.
Ny serivisy SEO tsara sy mahomby dia hametraka hatrany ny fanamby amin'ny fametrahana tranonkala iray ao an-tanàna toa an'i Warsaw.
Ireo tranga izay hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny tranonkala manangana an'i Warsaw sy any amin'ny faritra hafa ao Polonina.
Inona no tokony ho raisina amin'ny fifandraisana amin'ny fametrahana ny tranokalanao ao Mazovia ?.
Araka ny voalazanay teo aloha, ny singa misy ny antony maro, toy ny:
Fifaninanana ao amin'ny Google
Manolotra anao fiaraha-miasa amin'ny sampana marketing manokan'ny fitantanana tsara indrindra ao Dubai aho.
Maneho amin'ny fomba mangarahara foana ny habetsaky ny asako sy ny fomba hizarantsika ny tranokalanareo any Warsaw.
Ny fizarana voalohany amin'ny fizotry ny fizotry ny toerana dia ho fanaraha-maso SEO.
Hevitra / SEO dia dingana ara-pitsaboana amin'ny ankapobeny. Voalohany, ny tranokala na tranokala dia tsy maintsy dinihina amin'ny resaka haingam-pandeha ao amin'ny Google.
Hamarino ny haavon'ny pejy ao amin'ny Google
Azonao atao izany eto:
Ny tena manan-danja indrindra dia ny mahita ny fahefana nomen'ny tranonkala anao.
Tsara koa ny manamarina ny isan'ireo rohy miditra sy mivoaka mankany amin'ny faritra.
Jereo eto: https://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/
Taorian'ny fanamarinana ny DA - Domain Authority sy ny PA - Page Authority. Ity dia tsy misy ny singa Google momba ny sokajy fa mendrika ny hahita.
Ilaina mijery ny habetsahan'ny valin'ny fikarohana voajanahary ao amin'ny Google. Ary firy ny antony mety hanimba ny fametrahana ilay pejy.
Amin'ny ankapobeny, ny vidin-tsarimihan'ny tranonkala iray ao Varsovia dia ahitana ihany koa ny famoronana votoaty ao amin'ny bilaogy sy fanatsarana ny tranokalam-pifandraisana amin'ny teny malaza nofidian'ny mpanjifa. Izany, raha fintinina, ianao.
Inona no andraikitsika manokana amin'ny fametrahana ny orinasanao?
Ny orinasanay amin'izao fotoana izao dia manisy fiheverana bebe kokoa ny bilaogy manan-danja sy ny votoaty navoaka anaty sehatra ivelany.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny hanoloran'ireo tranonkala napetraka ao Warsaw ny mpamaky azy, mazava ho azy, ary ny karoka Google fikarohana ny tsara indrindra sy ny ideolojia izay, araka ny hevitro, dia anisan'ny votoaty tena sarobidy indrindra ao amin'ny Google.
Tokony hotadidintsika fa indraindray ny vohikala dia navesatra ihany koa tamin'ny "fahadisoana nataon'ireo mpanohitra avy amin'ny lasa" - ohatra, izy ireo dia natsangana tamin'ny sehatra misy ambany, ka nitarika ho amin'ny rindran-tserasera tsy dia tsara loatra.
Amin'ny toe-javatra toy izany dia mila miady mafy isika indraindray herinandro vitsivitsy hampitombo ny SEO.
Hanampy amin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa koa ny mpikarakara antsika. Ny toerana misy ny Google dia tena sarotra. Azo antoka fa hanolotra anao ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny orinasanao ianao.
Izay hamela antsika hiseho amin'ny valin'ny fikarohana miaraka amin'ny orinasa any Polonina.
Ny tombontsoantsika? Miasa manerana an'i Warsaw izahay
Tsy misy afa-tsy ny fivarotana marika sy fanamafisana!
Midika izany, tsy misy fohy ny lohahevitra momba ny fametrahana tranokalan'i Warsaw.
Miaraka izahay manana traikefa nandritra ny taona 150 tamin'ny fametrahana tranonkala tao Warsaw.
Manamboatra tranokala mety tsara ao Varsovie izahay. Noho izany, ny vohikalan'ny mpanjifantsika dia eo amin'ny toerana ambony indrindra ao Bing sy Google.
Manasa anao izahay hahafantatra ny tolotra omentsika (ireo toerana tokony hiorenantsika eto ambany) ary ny vaovao hanombohana ny fiaraha-miasa any Varsovie.
Birao ahafahana manangana toerana ho an'ny orinasa manana ny fepetra avo lenta any Varsovie izahay. Ny tanjonay dia manompo ny mpanjifa tsara indrindra avy any an-drenivohitra.
Afaka mahita anay ao OLX ao Warsaw ianao!
Jereo ny famaritana amin'ny antsipirian'ny tranokalan-tranonkala ao Warsaw.
Toeran'i Warsaw Wilanów
Ny tranokalan'ny tranokalan-tserasera Warsaw no ho lohahevitra fototra ho antsika. Noho izany, ireo manampahaizana manokana antsika dia efa voaofana ho an'ity dingana ity mandritra ny taona maro.
Manatona ny orinasam-pifandraisan-davitra sy ny tetikasa ary ny tsirairay izahay tsirairay. Ao amin'ny lohahevitry ny fametrahana tranonkala ho an'ny fizaràny - Warsaw. Tsy manan-tsahala isika.
Satria fantatsika ny fahafahan'ny tsena ary manangana tetik'ady fampandrosoana ho an'ny orinasa tsirairay. Misaotra an'izany izahay fa mahatratra ny vondron'olona mahantra.
Mampiasa fitaovana mahomby amin'ny aterineto ihany izahay izay ahafahanao mandresy lahatra kokoa amin'ny Google.
Ny fahaizana, ny fahaizana ary ny Dubai dia miaina amin'ny fametrahana pejy amin'ny teny anglisy sy arabo, miantoka ny faharesen'ny tranonkala fifaninanana amin'ny aterineto.
Ny fividianana mahasoa sy ny dokambarotra an-tserasera dia hahatonga ny orinasa Dubai City hampitombo ny varotra ny vokatrao.
Ny orinasanay dia ekipa iray izay hahatonga anao hahatsapa ho matoky anao bebe kokoa amin'ny tsena ary hampitombo ny isan'ny fitadiavana ny vokatra / ny tolotrareo amin'ny fametrahana tranokala any Varsovia ary hamela anao hankafy ny tombony tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny orinasa.
Misaotra ny filaminana sy ny vidiny mora foana tao Warsaw. Na dia sarotra inoana aza izany, dia mitazona ireo hevitra roa ireo.
Jobs in South Africa in Dubai
Aogositra 30, 2018
Indianina ao Koety Jobs
Please Hiditra manome hevitra
0 Ahoana ny mpanoratra